Languagezọ asụsụ mba ọzọ na ntụzi aka Page
Kpido: Languagezọ asụsụ mba ọzọ na ndụmọdụ
site Tranquillus | Sep 20, 2021 | Na weebụ |
Ịmụta ịmalite mkparịta ụka n'asụsụ mba ọzọ bụ okwu dị mkpa. Enwere ọtụtụ okwu iji hụ na a ghọtara gị, ghọta ma sonye na mkparịta ụka gị na onye nke ọzọ. “Aghọtaghị m”, “ị nwere ike ikwugharị ya”, ma ọ bụ ọbụlagodi “gịnị ka ị na -akpọ nke ahụ” bụ okwu dị mfe ịmụta nke ga -enyere gị aka igosipụta onwe gị n'asụsụ Bekee, German, Spanish, Italian na Portuguese Portuguese.
Gịnị kpatara na otu esi amalite mkparịta ụka n'asụsụ mba ọzọ? ^
Ijide n'aka na onye na -akparị gị ghọtara gị nke ọma bụ ihe ndabere maka iduzi na ịmalite mkparịta ụka n'asụsụ mba ọzọ. Mgbe ị na-eme njem na mba ofesi ebe ị na-enweghị ezigbo asụsụ, ịmara okwu a nwere ike ịchekwa ndụ n'ezie n'ọtụtụ ọnọdụ. Ịmara ka esi ekwu "ị nwere ike ikwugharị ya?", "Gịnị ka ị na -akpọ ya?" ma ọ bụ "ị ghọtara m?" nwere ike inyere gị aka ka gị na onye nke ọzọ dokwuo anya ọnọdụ ma mee ka ị ghọta onwe gị.
N'ezie, ịmara otu esi amalite mkparịta ụka ezughị iji nwee ahụ iru ala n'ọnọdụ niile. Yabụ ịmụtakwu okwu, meziwanye ma ọ bụ meziwanye nkà gị n'asụsụ mba ọzọ, ọ nweghị ihe dịka iji ngwa mmụta asụsụ dị ka MosaLingua. Na iji nwekwuo ahụ iru ala na mgbanwe gị niile, zụọ onye mmekọ asụsụ!
Yabụ ị ga -achọta okwu na okwu dị n'okpuru ka ị chọpụta ka esi amalite mkparịta ụka n'asụsụ Bekee, German, Spanish, Italian na Brazil Portuguese. Ọ bụ naanị anyị ka anyị chọrọ ka ị nwee ezigbo mgbanwe!
Kwuo "Abụ m onye France" ^
Bekee: Abụ m onye America / Bekee
Ịtali: Sono italiano / a
Igbo: Soy español (a)
Kwuo "Aghọtaghị m" ^
Igbo: Aghọtaghị m
German: Ọ dị m nwute
Portuguese: Não heari
Ịtali: Ọ bụghị capisco / Non ho capito
Spanish: Enweghị m ihe ọ bụla
Na -asị "Ị ghọtara m?"
Igbo: I ghọtara m?
Igbo: Verstehen Sie mich?
Ịtali: Enwere m ike?
Spanish: ¿Enwere m ihe niile?
Kwuo "Ọ nwere onye na -asụ French?" ^
Igbo: Ọ nwere onye na -asụ bekee?
German: Spricht ụnyaahụ jemand Deutsch?
Ịtali: kedu ka ị ga -esi nweta ya?
Kwuo “Kedu ka ị si ekwu… na [asụsụ ebumnuche]?” ^
Igbo: Kedu ka ị si ekwu… na [asụsụ ebumnuche]
German: Gịnị ka ọ bụ…… auf [Zielsprache]?
Ịtali: Bịa ka m chere… na [lingua di arrivo]?
Kwuo "Gịnị ka ị na -akpọ nke ahụ?"
Igbo: Gini ka ana akpo nke a?
Ịtali: Bịa lee chiami questo?
Igbo: ó Cómo llamas a esto?
Kwuo "Gịnị na -eme…?"
Igbo: Kedu ihe… pụtara?
German: Ọ dị heißt…?
Portuguese: Kedu ihe ọ pụtara…?
Ịtali: Ọ pụtara ...?
Spanish: é Kedu ihe pụtara…?
Kwuo “Jiri nwayọ, biko” ^
Igbo: Ị nwere ike kwụsịlata, biko?
Ịtali: Più piano / lentamente, kwa ọkacha mmasị
Spanish: ed Puedes hablar más despacio, ọ bụ amara?
Kwuo "Anaghị m asụ (nke ọma) [asụsụ ebumnuche]" ^
Igbo: Anaghị m asụ [asụsụ ebumnuche] (nke ọma)
Ịtali: Non parlo (n'okpuru) [lingua di arrivo]
Spanish: Ọ dịghị hablo [lengua destino] (muy bien)
Kwuo "Ana m asụ (ntakịrị) [asụsụ ebumnuche]" ^
Igbo: Ana m asụ (ntakịrị) [asụsụ ebumnuche]
Ịtali: Parlo (un po ') [lingua di arrivo]
Na -asị "Ị ghọtahiere m" ^
Igbo: Echere m na ị ghọtahiere m
Portuguese: Você m nụrụ nke ọma
Ịtali: Lei mi ha capito nwoke
Spanish: Creo que no me anụbeghị
Kwuo "Ị nwere ike ikwughachi ya biko?"
Igbo: Ị nwere ike ikwughachi ya, biko? / Kwuo ọzọ?
German: Kedu ka ị ga -esi mee ya?
Ịtali: Ọ bụ otu ihe ka mma?
Igbo: Ọ dị m ka m na -ekwughachi ugboro ugboro, ọ masịrị m?
Kwuo "Ana m amụta [asụsụ ebumnuche]" ^
Igbo: Ana m amụ [asụsụ ebumnuche]
Ịtali: Sto imparando [lingua di arrivo]
Ugbu a ị matara ka esi amalite mkparịta ụka n'asụsụ mba ọzọ ^
Nke a bụ! Ugbu a ị maara ka esi amalite mkparịta ụka n'asụsụ mba ọzọ n'asụsụ 5 bara uru n'ụwa niile. Yabụ na ọ bụrụgodi na ị chọghị ịsụ asụsụ ọ bụla nke ọma, ị nwere ike ịpụ mgbe ụfọdụ… ọnọdụ dị mgbagwoju anya!
Ịga n'ihu ^
Ị nwere mmasị n'isiokwu a?
Emeela nke ọma maka ịgụ edemede a ruo n'isi. Kedu ihe ị chere banyere ya? Biko hapuru anyị ihe ederede, ọ ga-akpali anyị idekwuo ederede
Daalụ maka votu gị
Obere pịa anaghị efu gị ihe ọ bụla, mana ọ dị anyị ezigbo mkpa:
Chọrọ ịmalite ozugbo?
Bido ịmụ asụsụ n’efu
Ihe edemede a ọ na - eme ka ịchọrọ ịmụ asụsụ ma ọ bụ karịa?
Anyị nwere 2 oke ozi ọma… Nke mbụ: anyị nwere ike inyere gị aka Nke abụọ ozi ọma: ị nwere ike ịmalite n'efu na ugbu a! Rụọ ọrụ nnwale n'efu gị ma jiri usoro a dị irè maka ịmụ asụsụ maka ụbọchị 15.
Flashcards iji mụta okwu, vidiyo na ụdị nke mbụ nwere ndepụta okwu, akwụkwọ ọdịyo, ederede dabara na ọkwa gị: MosaLingua Premium (Web & Mobile) na -enye gị ohere ịnweta ihe a niile, na ọtụtụ ndị ọzọ! Malite ozugbo (ọ bụ n'efu na enweghị ihe egwu).
M na-amalite ozugbo
site Tranquillus | August 30, 2021 | Na weebụ |
Ọ dịtụla mgbe ọ dị gị ka ị na-akparịkarị mmadụ, na-akparị mmadụ ma ọ bụ na-emegide gị, na-enwekwu ọmịiko ma nwekwaa obi mgbe ị na-asụ asụsụ ọzọ? Ọ bụ ihe nkịtị! N'ezie, ọtụtụ ọmụmụ na -egosi na ịmụ asụsụ ọhụrụ nwere ike ịgbanwe omume mmadụ n'ebe ndị ọzọ nọ ... ma ọ bụ onwe ya! Ruo n'ókè ha a learningaa ka ịmụ asụsụ pụrụ ịba uru maka mmepe onwe onye? Ọtụtụ nchọpụta egosila na ịmụ asụsụ na -eduga n'ịgbanwe ụdị mmadụ.
Ndị nyocha ugbu a nwere otu olu: ịmụ asụsụ na -eduga n'ịgbanwe ụdịrị ndị na -amụ ihe. Ọmụmụ ihe izizi banyere isiokwu ahụ bụ nke emere n'afọ 60 site na psycholinguist Susan Ervin-Tripp, onye ọsụ ụzọ na ọmụmụ gbasara akparamaagwa na mmepe asụsụ n'etiti ndị na-asụ asụsụ abụọ. Susan Ervin-Trip bụ ọkachasị mere ndị nnwale nnwale nnwale ya na ndị okenye asụsụ abụọ. Ọ chọrọ inyocha nkọwa nke ọma na ọdịnaya nke okwu asụsụ abụọ na -agbanwe dabere n'asụsụ.
Na 1968, Susan Ervin-Trip họọrọ ka ọ bụrụ isiokwu ụmụ nwanyị ọmụmụ mba Japan bi na San Francisco wee lụọ ndị America. Ha kewapụrụ onwe ha site na obodo ndị Japan bi na America, ụmụ nwanyị a nwere ohere ole na ole ịsụ Japanese. Ajụjụ a nke Susan Ervin-Trip kwadebere na-atụ aro ijikọ mmetụta na ọnọdụ a: "Mgbe ọchịchọ m dị iche na nke ezinụlọ m, ọ na-adị m ...". Ọ bụrụ na ndị na -asụ Japanese na -egosipụtakarị mmetụta nke “nnukwu ihe ọghọm” na Japanese, mmetụta a na -egosipụta na Bekee dị nnọọ iche ebe ọ bụ na ọ bụ “ike ime ihe dịka ọchịchọ mmadụ si dị” nke ewepụtara n'ihu - ihe ngosi siri ike.
Mfe ndabara? Eleghị anya ọ bụghị: anyị na -ahụ ọdịiche a na nkọwa n'ọmụmụ ihe ọmụmụ nke onye nyocha Michele Koven mere na 1998 n'etiti ndị okenye Parisian kwagara Portugal, onye ọ rịọrọ ka ọ kọọ ụfọdụ ahụmịhe nke ọ bụla n'asụsụ ọ bụla (French na Portuguese). . Nsonaazụ gosiri mgbanwe agwa dị mkpa. Ya mere, ụmụ nwanyị nwere mmasị ịgbachitere echiche ha na akụkọ n'asụsụ French, ebe ha na -emekwu ohere mgbe ha na -asụ Portuguese.
Ihe atụ nke Lucille Duchêne
Ma nke ahụ abụghị naanị: a gbanwekwara agwa ha dabere n'asụsụ akụkọ ahụ ejiri. Michele Koven gwara ndị sonyere ka ha kọwaa onwe ha, mgbe niile n'asụsụ abụọ. Otu n'ime ha, onye kọwara onwe ya dị ka "onye iwe na -ewe iwe" mgbe ọ na -asụ French, họọrọ ịkọwa onwe ya dị ka "onye ahịa akụ na -akụda mmụọ, nwere nsọpụrụ na onye nwere ndidi nke na -achọghị ịdọrọ uche ya." onye mbịarambịa ”mgbe ọ na -asụ Portuguese.
Kedu ihe ọmụmụ abụọ a na -agwa anyị? Ọ dị mfe: ka ị nwee ike ikwupụta echiche gị nke ọma dịka o kwere mee n'asụsụ mba ọzọ, ọ dị mkpa ịmụta na iji okwu na nke dị iche iche. Ọ bụ n'ihi nke a ka ụzọ Babbel siri dabere na mmegharị mkparịta ụka nke na -adaba n'ụzọ zuru oke na ọnọdụ mmụta dị iche iche.
Kedu mmasị maka gị? Ọbụghị naanị na ọ dị nfe ịchọta obere oge echekwara maka ịmụ asụsụ na nhazi oge gị, mana isiokwu nke nkuzi na -adabara mmasị gị. Ndị ọkachamara na -asụ asụsụ na ịsụ asụsụ dị iche iche mepụtara ya, emepụtara nkuzi Babbel iji nyere gị aka ime ka okwu gị na ihe ọmụma asụsụ gị ka mma dịka ebumnuche gị siri dị. Ọ bụ ụzọ dị mma iji jikọta mmepe nke onwe gị wee nwee ọmarịcha, ịcheghị?
Agbanyeghị, ọ bụ ezie na ọmụmụ ndị a na -egosi nsonaazụ dị mkpa, ekwesịrị ka ejiri nlezianya gụọ ha. N'ezie, ọ nweghị onye n'ime ha na -eburu n'uche ọnọdụ nke asụsụ ndị ọrụ afọ ofufo na -asụ, yana ihe dị iche n'etiti asụsụ nke ọ bụla.
Jikọta mmepe onwe onye na mmụta
Ọnọdụ nke ịmụ asụsụ dị mkpa iji ghọta echiche ya, ya mere mmetụta dị mma ma ọ bụ nke na -esite na ya pụta. N'ezie, ịmụ asụsụ ọhụrụ mgbe ị na -eme njem, n'oge ọmụmụ ya ma ọ bụ maka ebumnuche ọkachamara agaghị ewepụta otu nghọta asụsụ ahụ na onye na -amụ ihe, onye na -agaghị enwecha ahụ iru ala n'ụlọ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na amanye asụsụ, o yikarịrị ka a ga -ahụ ya n'ụzọ na -adịghị mma wee bute mkpọchi.
Onye odeakụkọ America bụ Robert Lane Greene si otú a mee ka a ghọtakwuo na ndị na -asụ asụsụ abụọ na -ejikọ asụsụ ala ọzọ nwere ọnọdụ akọwapụtara yana ọkachasị ahụmịhe mmetụta uche n'oge ndụ ha. Ọnọdụ ndị a pụrụ iche na -emetụta mmetụta ndị ahụ.
Ọ bụ n'ihi nke a ka ụzọ Babbel dabere na nkuzi nkeji iri na ise lekwasịrị anya na mmemme mkparịta ụka nke na-adaba n'ụzọ zuru oke na ọnọdụ mmụta dị iche iche. Ọbụghị naanị na ọ na -adị mfe ijikọ ịmụ asụsụ n'ime nhazi oge gị, mana isiokwu ndị a tụlere na nkuzi kwekọrọ na mmasị gị. Uru maka mmepe onwe gị!
Asụsụ anyị na -asụ na -emetụta etu anyị si ele ụwa anya
Ọ bụrụ, dị ka anyị hụworo, ọnọdụ mmụta na -arụ ọrụ dị mkpa, kedụ maka ndị mụtala asụsụ ahụ? Okwu nke polyglot bụ ihe na -atọ ụtọ nke ukwuu: n'ezie, ọtụtụ ọmụmụ na -egosi na nke ikpeazụ na -eto nke ọma ma ọ bụ obere dabere na asụsụ ejiri. Ọtụtụ nchọpụta na -egosi na nhazi asụsụ nwere ike gbanwee ma n'ezie na -emetụta ụzọ anyị si eche echiche, iche echiche…
Wilhelm von Humboldt, onye bụ Prussia Minista steeti na onye guzobere Mahadum ọhụrụ nke Berlin, bụ onye ama ama na ọ rụrụ ọrụ na usoro ihe ọmụmụ mmadụ iji mata mba dị iche iche. Asụsụ bụ mgbe ahụ ihe dị mkpa na nkọwa nke obodo mmadụ: dị ka ya si kwuo, asụsụ na -ewepụta ọhụụ nke ụwa akọwapụtara maka obodo mmadụ ọ bụla. O kwenyere na ọhụụ anyị gbasara ụwa bụ ngosipụta nke asụsụ anyị na omenala anyị. Ya mere, ịsụ asụsụ nke abụọ na -agbanwekarị echiche anyị ma na -enye anyị ohere ịhụ gburugburu ebe anyị si n'akụkụ dị iche.
Ọmụmụ ihe ndị ọzọ, dị ka nke ahụ na njikọta asụsụ nke ndị ọkà mmụta asụsụ America bụ Edward Sapir na Benjamin Lee Whorf mere n'afọ ndị 50, egosipụtala mmekọrịta siri ike n'etiti asụsụ na echiche pụrụ iche nke ụwa. Dị ka ha si kwuo, ụmụ nwoke na -ebi ndụ dịka omenala ha si dị na mbara igwe niile ma na -egosipụta ya site n'asụsụ a na -asụ.
Na -eme nke ọma site n'ịchọpụta ụdị ọhụrụ nke onwe gị
Site na nlele mmụta asụsụ, ọmụmụ ndị a dị iche iche na -egosi na njikọ njikọta asụsụ na mmepe onwe onye nwere njikọ. Ọtụtụ ihe na -akọwa mmetụta nke inwe “ndị ọzọ” mgbe ị na -asụ asụsụ mba ọzọ:
Ọdịiche nzere asụsụ: dabere na ọkwa nke asụsụ, ọ ga -ekwe omume inwe ike ikwupụta onwe ya nke ọma n'ọtụtụ isiokwu dị iche iche yana ọkachasị inwe ike ikwu maka mmetụta mmadụ ma ọ bụ ime ihe ọchị na njakịrị.
Ọdịiche dị na omenala: asụsụ mba ọzọ na -egosi nzute na ịdị nso na omenala mba ofesi. N'ihe gbasara ndị na -asụ asụsụ abụọ nwere otu ọkwa n'asụsụ abụọ ma ọ bụ karịa, a na -enwe mmetụta dị iche na nke asụsụ ala nna.
Ọdịiche asụsụ: Ụtọasụsụ na nhazi nke asụsụ dị iche site n'otu asụsụ gaa na nke ọzọ, nke na -agbanwe ụzọ e si egosipụta onwe ya.
Ihe ndị a niile dị iche iche na -emetụta agwa anyị n'ihi na ha na -enye ohere nke iche echiche n'asụsụ dị iche na asụsụ ala anyị, nke n'onwe ya nwere omenala pụrụ iche. Ọtụtụ ụzọ dị iche iche nke ịghọta na ịkọwa ụwa, yana ịpụta nke ọma na ya. Yabụ kedu ihe ị na -eche ka ịmụta Babbel asụsụ ọhụrụ?
site Tranquillus | August 25, 2021 | Na weebụ |
Ị chọrọ ịkwalite asụsụ gị nke ọma ngwa ngwa? Iji onyonyo echiche nwere ike inyere gị aka imezu ebumnuche gị nke ọma. Kedu ka usoro a si arụ ọrụ? Lisa Joy, otu n'ime ndị nkuzi bekee na MosaLingua na onye na -amụ asụsụ n'onwe ya, na -enye gị ụzọ anọ iji mepụta onyogho dị mma nke nwere ike inyere gị aka melite ebe nchekwa gị na mmụta asụsụ.
Jiri onyonyo echiche iji melite n'asụsụ ebumnuche gị ^
Kedu otu esi echeta ihe omume a n'isi gị? Ọ bụ n'ụdị okwu, ụda ma ọ bụ onyonyo? Ọtụtụ ga -eji foto zaghachi. Ọ bụrụ otu a, ikekwe ị bụ onye na -amụ ihe anya. Ma ọ bụ ikekwe ị nwere ụdị ozi ọzọ nke mere ka ebe nchekwa gị rụọ ọrụ?
Ugbu a ị ghọtarala ihe m na -ekwu site na "ụbụrụ anyị na -arụ ọrụ site n'izitere anyị onyonyo," ka anyị were ya n'ọkwa ọzọ wee detuo ihe ndị nwere ọgụgụ isi na -eme iji cheta.
Mepụta onyonyo echiche dị mma maka mmụta ^
Na mpaghara mmụta asụsụ, enwere ndụmọdụ ga -enyere gị aka ịmụta okwu ọhụrụ ngwa ngwa yana rụọ ọrụ nke ọma. Ọ bụ maka iji onyogho echiche site n'ijikọta ha na ha. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịchọrọ icheta okwu French "anyanwụ", ị ga -eme ka ohere ịcheta ya dị mma ma ọ bụrụ na ijikọ okwu ahụ na nnọchi anya nke anyanwụ.
Ọ ka na -arụ ọrụ? Ọ bụghị mgbe niile, n'ihi na ọ nwere ike bụrụ ihe a na -ahụkarị. Ọ dabara nke ọma, imepụta onyogho echiche adịghị mgbagwoju anya. Ị ga -amụta ka esi eme ya ebe a! Jide n'aka na imepụta onyonyo nwere otu ma ọ bụ karịa n'ime njirimara anọ ndị a:
mkpakọrịta pụrụ iche
Ka anyị leba anya na nke ọ bụla n'ime ha ka ị nwee ike ịghọta nke ọma wee bido tinye ha n'ọrụ n'ịmụ asụsụ gị ozugbo.
Ikwubiga okwu ókè ^
A ga -ekwubiga ezigbo onyogho echiche, nke pụtara na ọ ga -enwerịrị nha na oke nke na -adabaghị n'ihe ị na -ahụkarị. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịchọrọ iburu okwu ahụ bụ "pied" na French, ị nwere ike icheta nwoke nwere otu ụkwụ toro ogologo karịa nke ọzọ. Ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịmụ okwu unghia (mbọ aka na Italiantali), were anya nwanyị nke mbọ aka ya toro ogologo ha na -emetụ ala! O siri ike ichefu ụdị ihe oyiyi a.
Mkpakọrịta pụrụ iche ^
Iji cheta okwu ahụ bụ "akwụkwọ", chee maka nwamba na -agụ akwụkwọ, na -ejigide ya n'agbata ụkwụ ya abụọ ... Nwalee usoro a wee were ya dịka egwuregwu.Ọ nwere ike bụrụ ihe na -atọ ụtọ n'ezie!
Mmegharị ahụ ^
Ị maara na mkpali gị na -akpalikwa ọbụna karịa mmegharị ahụ? Nke a bụ ihe mere eji edekọ ihe onyonyo na -eme nke ọma n'ụbụrụ gị: ọ na -eme ka o siere ha ike ichefu. Ọ bụrụ na ị ga -echeta okwu coche (ụgbọ ala n'asụsụ Spanish), ọ ka mma iche ụgbọ ala na -emegharị ahụ. Ma ọ bụ ọ bụrụ na ị ga -echeta okwu ahụ bụ "okwute" na French, were okwute tụgharịa.
Mmetụta mmetụta uche ^
Mmetụta uche na -arụkwa ọrụ dị oke mkpa na ncheta gị. Dịka ị nwere ike ghọtaworị, ọ na -esiri gị ike ichefu ebe ejikọtara na ahụmịhe siri ike ma ọ bụ nke jikọtara oge obi ụtọ ma ọ bụ mwute. Ọ na -ejukarị anyị anya na anyị nwere ike icheta nkọwa kacha nta nke ncheta ndị a, mgbe anyị nwere ike ịga n'ihu otu ụlọ ahụ ka anyị na -arụ ọrụ n'agaghị hụ ụcha ya ma ọ bụ ọnụ ala ya nwere ...
Ọ bụrụ na ị toruola ogo n'oge ahụ, ikekwe ị ga -echeta kpọmkwem ebe ị nọ na ihe ị na -eme mgbe ị mụtara ihe mere na Septemba 11, 2001, nke bụ ụbọchị mmetụta uche. N'otu aka ahụ, oge ọ bụla ị mụtara okwu ahụ bụ “nkịta” n'asụsụ ọhụrụ, ị nwere ike jikọta ya na anụ ụlọ gị.
Ọ gwụla ! Lee ka usoro ndị a si dị mfe? Ọ bụ oge gị iji mepụta onyogho nke uche gị nke ọma! Soro anyị kerịta ụfọdụ echiche gị na nkwupụta ma mee ka anyị mata nke n'ime usoro anọ a masịrị gị iji.
Otu akara ikpeazụ n'agbanyeghị: ka ha na -abawanye, ọ ga -adị mfe icheta. Omume nke imepụta onyogho ga -enyere gị aka n'usoro iburu n'isi. Ihe onyonyo na -arụ ọrụ nke ọma ma ọ bụrụ na ị mepụta ya n'onwe gị. Ya mere, mepụta ihe ma nwee anụrị!
Ndụmọdụ niile dị na vidiyo ^
Nwere ike ịchọta ndụmọdụ Lisa-Joy na vidiyo. Ọ dị n'asụsụ Bekee, mana enwere ndepụta okwu n'asụsụ French (yana asụsụ ndị ọzọ) ma ọ bụrụ na achọrọ. Pịa na wiilị iji mee ka ha rụọ ọrụ, ị nwekwara ike belata ọsọ akwụkwọ ọkọwa okwu ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Idenye aha na ọwa YouTube anyị!
Ọ bụrụ na akụkọ a masịrị gị, nweere onwe gị ilele ihe ndị a:
site Tranquillus | August 18, 2021 | Na weebụ |
Afọ abụghị ihe mgbochi ịmụ asụsụ mba ọzọ. Ndị lara ezumike nka nwere oge itinye onwe ha n'ọrụ ọhụrụ na -akpali ha. Ihe mkpali dị ọtụtụ ma a na -ahụ uru ya na obere oge yana ogologo oge. Amamihe ọ na -abịa n'ịka nká? A na -akpọ nke ọdụdụ dịka "sponge ire" mana ka ị na -etolite, ị ga -enwe ike inyocha ihe isi ike gị na adịghị ike gị wee merie ha ngwa ngwa iji nweta nsonaazụ na -emezu ihe ị tụrụ anya ya.
Afọ ole ka ị kwesịrị ịmụ asụsụ mba ọzọ? ^
A na -ekwukarị na ọ na -adịrị ụmụaka mfe ịmụta asụsụ. Nke a ọ pụtara na ndị okenye ga -enwe nnukwu nsogbu n'ịmụ asụsụ mba ọzọ? Azịza: mba, nnweta a ga -adị iche. Ya mere, ndị agadi ga -agbasi mbọ ike dị iche iche. Ụfọdụ ọmụmụ na -akọwa na afọ kacha mma ịmụ asụsụ mba ọzọ ga -abụ mgbe ọ ka dị obere, n'agbata afọ 3 na 6, n'ihi na ụbụrụ ga -anabata ya nke ọma. Ndị nyocha na MIT (Massachusetts Institute of Technology) abịa na nkwubi okwu na mmụta asụsụ na -esiri ike mgbe afọ 18 gachara maka ebumnuche ọdịbendị, ndu na ihe ọmụmụ. Agbanyeghị, ịmụ asụsụ mba ọzọ mgbe ị mere agadi ga -ekwe omume, ọ bụ maka itinye mkpali na ịgbasi ike.
Gịnị na -akpali ndị okenye ịmụta asụsụ mba ọzọ? ^
Asụsụ ndị okenye kacha mụta ^
Dị ka ọmụmụ Ifop si kwuo, 85% ndị okenye na -ekwu na ha nwere ike ịmụ asụsụ mba ọzọ. N'ime afọ dijitalụ, ndị okenye na -ahụ maka iji ohere mmụta ọhụrụ a n'ịntanetị. 91% n'ime ha kwenyekwara na ọ bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma isi nọrọ na mmụọ. N'ezie, ebe ọ bụ na ha lara ezumike nká, ọtụtụ ndị agadi na -anọgide na -amụta ihe ọhụrụ! Ha na -eme mmemme, gụnyere ịmụ asụsụ ọhụrụ mgbe ụfọdụ.
N'ime asụsụ ndị okenye kacha mụta nke ọma bụ Bekee (45%), Spanish (27%), Italian (19%) na German (11%).
Ka ị na -etolite, otú ahụ ka ịmụ asụsụ nwere ike iyi egwu. Agbanyeghị, ọmụmụ Ifop na-egosi anyị na ndị okenye na-esiwanye ike ma nwee ntụkwasị obi na nyocha ha karịa afọ 18-35.
Ohere ibido ^
Anyị jụrụ Henri, 75, lara ezumike nká na Saint Jean de Luz, gịnị kpaliri ya ịmụ asụsụ Spanish. Ọ kọwaara anyị na ya nwere ụlọ na Lira, Spain, ebe ọ na -ezu ike n'oge mgbụsị akwụkwọ na oge oyi, n'ihi na oke okpomọkụ dị nro karịa na France. Ọ ga -achọ ka ya na ndị obodo kparịta ụka wee mee ka a ghọta ya mgbe ọ na -aga dọkịta ma ọ bụ klọb golf. Ebe o nwere oge na mkpali ịmụ ihe, ọ na -enwe ọganihu ngwa ngwa. Ọ jisiri ike debanye aha ya na klọb golf yana ndị egwuregwu akwa, ekwentị niile n'asụsụ Spanish! O nwere nnukwu nganga inwe ike ịkọrọ anyị akụkọ njem ya na Mosalingua.
Ọnọdụ ndụ ọhụrụ ^
E nwere ihe dị iche iche kpatara ịnụ ọkụ n'obi a maka asụsụ. Ịla ezumike nká na -eme ka ihe mgbochi ndị ọkachamara kwụsị, ọtụtụ na -enwetakwa ohere zuru oke iji rụọ ọrụ ndị ejiderela ogologo oge, iji mee ka ihe ọmụma ha baa ọgaranya, ịzụlite ọgụgụ isi, mana ọ bụghị naanị. Ịhọrọ ịla ezumike nka site n'ịmụ asụsụ na -egosi ọchịchọ ịtụgharị uche n'ọnọdụ ọhụrụ nke ndụ na mmekọrịta ụwa.
Meziwanye nkwukọrịta gị na ndị gbara gị gburugburu ^
Otu ihe kpatara ya nwere ike ịbụ ọchịchọ imeziwanye nkwurịta okwu, mgbanwe na ịkekọrịta onye. Ụfọdụ ndị mmadụ na -achọ ịmụta asụsụ a na -asụ na gburugburu ezinụlọ. Ebe ndị ọzọ na -achọ ịmata asụsụ asụsụ obodo a metụtara ka ha nwee ike gaa ebe ahụ hụ ụmụ ha na ụmụ ụmụ ha. Ya mere, a na -ejikọ ọchụchọ maka asambodo asụsụ na omume njem. 63% nke ndị okenye zara ajụjụ nyocha Ifop na -egosi na ha na -amụ asụsụ iji na -ekwurịta okwu nke ọma mgbe ha na -eme njem kama maka mmepe onwe ha (40%). Ya mere, ha dị njikere ịga ebe ọhụrụ maka njem mmụta. N'ezie, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya na ndị obodo na -agbanwere onwe ha, na -enweghị mgbochi asụsụ. N'ihi ya, anyị na -achọpụta na ọtụtụ ndị agadi na -amalite njem nlegharị anya ụwa na ndị ọzọ na -ekpebi ịla ezumike nka na mba ọzọ.
Jikọọ na mgbọrọgwụ gị ^
Ihe ọzọ na -akwali ndị agadi ịmụta asụsụ ọhụrụ bụ ọchịchọ nke ikwu okwu n'asụsụ nke nne na nna ha ka ha wee nwee ike jikọrọ mgbọrọgwụ ezinụlọ ha. Dị ka Simone, 81, onye sitere na German site na nne na nna nne ya, na -achọ ịmaliteghachi ọdịbendị nke ndị nna nna ya. Ọ na -echeta mkparịta ụka n'asụsụ German mgbe ọ dị obere, egwu ndị ọ mụtara mgbe ọ bụ nwata, emesịa omume ahụ furu efu. O kpebiri ịga klaasị na mahadum, nke nyere ya ohere ịghọta ụfọdụ egwu ụmụaka. Ịmụ asụsụ nke mgbọrọgwụ pụtara ịlaghachi na akụkọ ihe mere eme na mmalite ya, ikekwe ọbụna izute ezinụlọ ọhụrụ?
Usoro iji chekwaa ebe nchekwa gị na afọ ^
Ịla ezumike nka nwere ike bụrụ nzọ siri ike, ọ bụ ya mere imikpu onwe gị n'ịmụ asụsụ bụ ụzọ dị mma iji na -arụsi ọrụ ike. N'okwu a, gịnị ma ị were ihe ịma aka ọhụrụ iji nye onwe gị obi ike ma kpalie mmụọ? Otu n'ime isi ihe kpatara ịdebanye aha maka ọzụzụ bụ eziokwu na ị nwere ike kpalie ma rụọ ọrụ na ebe nchekwa gị kwa ụbọchị iji lụso ịka nká ọgụ. N'ezie, a na -eji ebe nchekwa eme ihe mgbe a na -amụ iwu ụtọ asụsụ, okwu ... Tụkwasị na nke ahụ, ọtụtụ ọmụmụ na -egosi na inweta asụsụ ọhụrụ nwere ike imeziwanye ikike nghọta nke ndị agadi wee zere, ma ọ bụ ọbụna gbuo oge mmalite nke ọrịa Alzheimer.
Kedu otu na afọ ole ka ịmụ asụsụ mba ọzọ? ^
Chọta nkwado dabara adaba ^
Enwere ọtụtụ ohere maka ịmụ asụsụ mba ọzọ. Nkuzi nke otu ma ọ bụ otu, ọzụzụ, asụsụ na -anọ maka ndị okenye imikpu, Mahadum efu ma ọ bụ mahadum niile (UTA), mkpakọrịta asụsụ mpaghara, nkuzi ịntanetị ... Ma ọ bụ na ekwentị, kọmpụta ma ọ bụ mbadamba, site na ngwa, ihe ọ bụla bụ kwere omume. Isi ihe bụ ịchọta ezigbo akwụkwọ mmụta dịka ọchịchọ na mkpa gị si dị.
Wepụta oge iji mepụta gburugburu dị mma maka mmụta. N'ihi ịntanetị, enwere ọtụtụ ọdịnaya iji meziwanye. Ị ga -ahụ akwụkwọ akụkọ, egwu, pọdkastị, ihe nkiri, ajụjụ… ihe niile ịchọrọ ime ka ọ bụrụ ihe ntụrụndụ dịka o kwere mee. Ọ bụrụ na ị nwere nkeji 20 na metro, nkeji iri n'ime ụlọ nchere, egbula oge ịmalite ngwa mmụta asụsụ gị. Ịmụ asụsụ ọhụrụ chọrọ ịdọ aka ná ntị na mkpali.
Amaja ikwu okwu! ^
Nwee obi ike ikwu okwu, atụla ụjọ imehie ihe, n'ihi na ka ị na -emekwu ihe, ka ị na -enwekwu ọganihu. N'ụzọ dị otu a, enwere ike iwusi mmekọrịta mmadụ na ibe ya ike, n'ihi na inwe onye mmekọ '' tandem '' bụ ụzọ isi mee mkparịta ụka anụ ahụ na nke mebere. A ga-akwalite ntụkwasị obi onwe gị na mgbochi asụsụ agaghịzi abụ nsogbu.
Jiri ngwa mkpanaka ^
Mosalingua na -enye ụzọ mmụta ngwa ngwa na ekwentị, mbadamba na kọmputa. N'agbanyeghị afọ ole gị, ebe obibi gị ma ọ bụ ihe mkpali gị, ị ga -enwe onye nchịkwa asụsụ mba ofesi dị nso iji bulie gị. Usoro a anaghị achọ ihe karịrị nkeji iri abụọ kwa ụbọchị, n'ime ọnwa atọ, mmadụ nwere ike iru ọkwa zuru ezu iji gafee obodo ma ọ bụ gụọ akwụkwọ akụkọ.
Egbula oge ọzọ, ọ bụchaghị oge ịmalite! Ma echefula inwe ntụrụndụ karịa ihe ọ bụla ọzọ.
Afọ ole ka ịmụ asụsụ mba ọzọ: ịga n'ihu ^
Ọ bụrụ na isiokwu a masịrị gị, nke a bụ akụkọ ọzọ nwere ike ịmasị gị:
Bonjour Senior bụ usoro ozi na ntụnyere maka ndị okenye na ndị na -elekọta ha. Anyị na -enye ntuziaka ndị bara uru, akụkọ na azịza nkwado n'ụlọ ma ọ bụ ebe obibi kwesịrị ekwesị.
site Tranquillus | Jul 15, 2021 | Na weebụ |
N’asụsụ ndị Japan, a na-akpọ ya 日本 (Nihon). Okwu a nyere ndị Japan n’asụsụ French. Agbanyeghị, anyị họọrọ aha Japan. Ederede ya n'asụsụ French dị ka "Pays du soleil levant", ọ bụ karịa ma ọ bụ obere ya pụtara n'ụzọ nkịtị na asụsụ nke mba ahụ. A red disk na ọcha ọcha. Akara kariri okwu na asusu ma gosiputara site na ọkọlọtọ. Japan - ma ọ bụ 日本, ya mere - bụ obodo ejirila ihe omimi kpụọ okpueze. N'ime ụfọdụ egwuregwu mgbagwoju anya nke agwaetiti: asụsụ Japanese.
Ya mere, olee ebe okwu Japon na French (na ihe ya na ya n'ọtụtụ asụsụ ndị ọzọ nke ụwa) si? Mgbe ndị ọkwọ ụgbọ mmiri Portuguese bịara n'oké osimiri na East East, ọ bụ ndị Mandarin nyefere ha aha ha nke agwaetiti Japan. Akpọrọ "Jipangu", aha ókèala a na-aghọ Japan n'oge na-adịghị anya!
Site na ndị mmụta 21.000 na France na 2018, asụsụ Japanese ka dị nnọọ n'azụ nde nde ụmụ akwụkwọ nke Bekee ma ọ bụ Spanish. Mana site n’afọ ruo n’afọ, asụsụ Mishima na-aga n’ihu na-enwu n’ Oke Osimiri Japan na Ugwu Fuji. Babbel na-enye gị nchọpụta asụsụ na ọdịbendị nke Japan!
Akụkọ banyere asụsụ Japanese site na oge Yamato ruo oge "Cool Japan"
Gburugburu 250, e guzobere usoro eze mbụ na mpaghara Yamato - mpaghara Nara dị ugbu a. Ebe panorama dị ugbu a na-agbanwe n'etiti ụlọ nke oge a na ụlọ nsọ oge ochie, wee malite mmalite ogologo nke asụsụ Japanese. Ole na ole ederede edere tupu mmalite nke oge a. Ruo ọtụtụ narị afọ, asụsụ ndị Japan dị ka ọ dị bụ ọdịnala a na-edeghị ede. Ọ bụ ndị mọnk Buddhist si China na-eweta usoro ihe osise ha na agwaetiti. Na narị afọ nke asatọ, n'okpuru oge Nara, ndị Japan malitere iji echiche ndị China eme ihe. Ederede ndị ọzọ mepụtara wee mepụta sistemụ a jikọtara ọnụ nke Japan nke agwaetiti na-aga n'ihu taa.
Ọ bụghị n’oge Edo, n’agbata narị afọ nke 1903 na XNUMX, ka asụsụ ndị Japan hiwere n’ezie. Oge ọhụụ ọ bụla na-eweta oke nke ọdịbendị na asụsụ. Na mbido narị afọ nke iri abụọ, oge Meiji, nke ya na oganihu na ime ka ọgwangwa nke obodo, guzozie asụsụ na ndabere nke asụsụ Tokyo. Na XNUMX, gọọmentị Japan bipụtara akwụkwọ ntuziaka nke asụsụ Japanese maka ụlọ akwụkwọ.
Approachzọ nke dị ka ụkpụrụ ọkọlọtọ nke Italian site na olu Florentine ma ọ bụ nnabata asụsụ Parisian mgbe mgbanwe French!
"Cool Japan": mgbe Tokyo banyere n'oge kawaii
Ihe mmasị nke asụsụ Japanese bụ ihe a na-apụghị ịwepụ na nke ahụ maka ọdịbendị ya. J-Pop, manga, anime, egwuregwu vidio, sushi na sake: a na-akpọ "Cool Japan", ike dị nro nke Japan na-ewe ọtụtụ ụdị. Site na Pikachu ruo Ndewo Kitty, gụnyere igbe bento na kimonos, kawaii (か わ い い), “mara mma” na French, bụ echiche na-ewu ewu nke jisiri ike bupu mba ụwa. Gụnyere na France.
N’agbanyeghi na onodu owuwe ihe omuma nke Japan, agwaetiti a na France emeela nmekorita chiri anya. Ihe ngosi nke nchacha, asụsụ French na ọdịbendị ndị nke ndị Japan akpaliwo mmasị… ruo n'ókè nke na-akpata ezi ọgba aghara nke mmụọ! Ha dị 200.000 ugbu a ịmụ asụsụ Molière. N'etiti onye na-ese ihe Foujita, onye isi nri Takeuchi na onye guzobere akara Kenzo, ọtụtụ ndị Japan etinyela aka na mmetụta ọdịnala ha, na ndekọ dị iche iche, site na idozi na Paris.
Ebee ka anyị na-asụ Japanese taa?
Asụsụ ndị Japan nwere ugbu a nde 130. N’asụsụ Japan, a na-asụkarị Japanese na California na Hawaii, ọ bụ ezie na iji asụsụ ahụ eme ihe ga-apụ ebe ahụ. Ihe karịrị kilomita 3.000 na ndịda Honshū, otu obere agwaetiti japan gara aga na-amata ndị Japan. Nke a bụ Angaur, otu n’ime steeti iri na isii nke Palau. N'ezie, n'àgwàetiti a nke Pacific nke nwere ihe karịrị 16 ndị bi na ya na mpaghara nke 100 nke Paris, Japan fọrọ nke nta ka ọ nwụọ.
Hiragana, katakana na kanjis: ederede 3 nke asụsụ Japanese
Ederede Japanese dabere na ọtụtụ ihe odide:
Hira The hiragana
Hmụta Hiragana na Katakana (ihe ịrịba ama 100 niile) agaghị ewe gị ogologo oge karịa mkpụrụedemede Cyrillic. Yiri usoro mkpụrụedemede Latin, hiragana bụ akara ngosi ụda olu nke eji ede Japanese. N’otu ụkpụrụ ahụ, edebere katakana maka mkpụrụ okwu si mba ọzọ (belụsọ Chinese). Banyere kanjis, e si na asụsụ China ketara ha. Ihe ịrịba ama ọ bụla nwere ụda ya na ihe ọ pụtara. Ọ bụrụ na ndị Japan gụọ 50.000, "naanị" 2.000 n'ime ha zuru ezu kwa ụbọchị. Enwere aha ndị ọrụ gọọmentị nke "ihe ndị a na-ejikarị kanjis" akpọ jōyō kanji. Ya mere, usoro ihe osise atọ a na-ebikọ ọnụ ma jiri ya eme ihe. Ọ bụghị ihe ọhụrụ ịchọta akụkụ Akwụkwọ Nsọ atọ n'otu ahịrịokwu.
Ndi asụsụ Japanese na Chinese bụ otu ezinụlọ? Mba! Ihe nketa nke kanjis bụ akụkọ ihe mere eme. Mkpụrụ ndụ asụsụ asụsụ abataghị na egwu.Marinarin bụ asụsụ Sino-Tibet, metụtara asụsụ ndị China. Japanese bụ iche. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, asụsụ a bụ ezinụlọ dịpụrụ adịpụ. Ozizi asụsụ Altaic, nke na-achọ ijikọ ndị Japan, Turkish, Mongolian ma ọ bụ Korea, ka na-ese okwu!
Asụsụ Japanese: asụsụ dị mgbagwoju anya… ka ọ bụ obere amacha?
Chinese, Russian, Arabic ... Ndị ọdịda anyanwụ na-enwe ike iru eru dị ka asụsụ siri ike bụ ndị na-adịkarị ụkọ ma dị anya na atụmatụ ha. Asụsụ Mishima abụghịkwa ihe ọzọ. Yabụ, asụsụ Japanese ọ siri ike mmụta to ma ọ bụ obere amacha?
E wezụga ihe mgbochi nke ederede na okwu ndị na-enweghị ihe jikọrọ asụsụ Indo-European, asụsụ Japanese na-eji usoro SOV (Isiokwu-Object-Verb) eme ihe. Ya mere, onye Japanese ga-asị "M na-eri achịcha ahụ" ọ bụghị "M na-eri achịcha ahụ" (SVO structure, Sub-Verb-Object). Ọ bụrụ na ojiji a nwere ike iyi ihe na-adịghị mma nye onye French, asụsụ SOV dị ọtụtụ karịa asụsụ SVO n'ụwa! Turkish, Persia, Basque, na Latin bu ihe omuma atu ndi ozo nke asusu SOV. Na Japanese, a na-ewepụ isiokwu ahụ mgbe a kọwara ya site na gburugburu, ọ bụghị ihe a na-ahụkarị iji mechie usoro dị mfe nke ụdị OV.
SOV, SVO, VSO,…? Na mgbakwunye na asụsụ SOV na SVO nke naanị mejupụtara ụzọ atọ nke idioms ụwa, njikọ ndị ọzọ enwere ike dịrị:
VSO, nke ụdị Verb-Subject-Object ("eri m achịcha"), dị ka Arabic ma ọ bụ Irish Gaelic; asụsụ VOS, nke ụdị Verb-Object-Subject ("rie achịcha M"), dị ka Malagasy; Asụsụ OVS, nke ụdị Obere-Verb-Subject ("achịcha ahụ riri m"), dị ka ụfọdụ asụsụ ndị Amerindian; asụsụ OSV, nke ụdị Object-Subject-Verb ("achịcha m na-eri"), ọtụtụ ihe dị obere… belụsọ maka ụzọ na-ekwu okwu otú ahụ e ji mara Yoda na Star Wars!
Ka o sina dị, ndị mmụta Japan nwere ike ị rejoiceụrị ọ inụ na ụfọdụ ezigbo asụsụ ụtọ asụsụ:
🗾 Japanese enweghị otutu
🗾 Japanese ọ bụla enweghị isiokwu doro anya
N'etiti ndị ọzọ akọwapụtara na Japanese, asụsụ ahụ enweghị okwu raara onwe ya nye iji gosipụta ọnwa, dịka Jenụwarị, Febụwarị, Machị, wdg. N'aka nke ọzọ, ndị Japan jikọtara kanji 月 (ọnwa na ọnwa na-enweghị isi) na ọnụ ọgụgụ nke ọnwa!
Mfe ma ọ bụ asụsụ siri ike, anyị agaghị eleghara ịdị mkpa nke mkpali na mmụta anya. Asụsụ ọ bụla nwere ihe ọ na-eme nke ọ na-adịrị onye na-asụ ya mfe ma ọ bụ sie ike.
site Tranquillus | Jul 14, 2021 | Na weebụ |
Iji mụta asụsụ Portuguese, ọ dị mkpa ilekwasị anya na mkpọpụta ya. Ị ga -ahụ na ịkpọpụta asụsụ Portuguese adịghị esiri ndị na -asụ French ike, n'ihi na a na -akpọ ọtụtụ mkpụrụedemede n'otu ụzọ ahụ n'asụsụ French! Na mgbakwunye, ọtụtụ fọnịm (ụda akwụkwọ ozi ma ọ bụ ngwakọta nke mkpụrụedemede) bụkwa otu. N’ezie, ịkpọpụta asụsụ Portuguese dị iche dabere na ebe ị na -aga, mana ntuziaka maka ịkpọ okwu Portuguese ga -enye gị ohere igosipụta onwe gị ma ghọta gị ebe ọ bụla. Bịa chọpụta Portuguese Portuguese!
Ịkpọ okwu Portuguese: ihe niile ịchọrọ ịma ka ị na -ekwu okwu nke ọma ^
Ebe ihe karịrị nde mmadụ narị abụọ na iri atọ na -asụ asụsụ a n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kọntinent niile (Eshia, Europe, Afrịka, na ebe enwere ọtụtụ, America), Portuguese so n'asụsụ kacha asụ n'ụwa. N'ihi ya, ọ bụ ihe dị otú o kwesịrị ịchọ ịmụ ya. Ya mere, anyị ga -elekwasị anya ebe a ịkpọpụta Portuguese nke Brazil, obodo nwere ọtụtụ ndị na -asụ Portuguese. Mana echegbula, ndị na -asụ Portuguese si mba ndị ọzọ ga -aghọta gị nke ọma, ọ bụrụ na ịchọrọ ịga Portugal ma ọ bụ Angola dịka ọmụmaatụ.
Iji mara ka esi akpọpụta Portuguese, ị ga -ebu ụzọ mụọ mkpụrụedemede gị. N'ebe a, enweghị nsogbu na nlele mbụ, ọ bụ otu anyị. A na -akpọ mkpụrụedemede 20 ma ọ bụ nwee otu “omume” dị na French: A, B, C, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, S, V, W , X, Y na Z. E tinyela mkpụrụedemede K, W, X na Y na mkpụrụedemede Portuguese n'oge na -adịbeghị anya n'ihi na ha na -abụkarị mkpụrụedemede n'asụsụ mba ọzọ.
Iji mee ka ọ dịrị gị mfe, anyị ka ga -ahụ ha niile. N'ezie, ọ bụrụ n'ịchọrọ inwe ike ịgụ na / ma ọ bụ ịkpọpụta okwu n'asụsụ Portuguese n'ụzọ ziri ezi, ị ga -ebu ụzọ tinye uche na mkpọpụta ha.
Kpachara anya n'agbanyeghị! Ihe ị ga -ahụ ebe a bụ iwu n'ozuzu. Enwere ike ịnwe mwepụ ma ọ bụ mkpọpụta mkpọpụta dabere na ebe ị gara ma ọ bụ onye ị na -agwa okwu (ọbụlagodi n'ime obodo!).
Ụdaume na mkpọpụta asụsụ Portuguese ^
A na -akpọkarị mkpụrụedemede A, M na O dị ka n'asụsụ French. Ị ga -ahụ mkpọpụta ụdaume niile n'okpuru:
A na -akpọ A dị ka “a” na unere
A na -akpọ E "é" dịka na meta (ụjọ)
A na -akpọ m dịka "i" na ilha (agwaetiti)
A na -akpọ O ma ọ bụ dị ka “o” mepere emepe, dị ka na avó (nne nne), ma ọ bụ dị ka “o” mechiri emechi, dị ka na porto (ọdụ ụgbọ mmiri)
A na -akpọ U dị ka “ma ọ bụ” na rua (n'okporo ámá)
A na -akpọ Y dị ka French “y” na yoga (yoga)
Kpachara anya, otu M ma ọ bụ N na -eso ya, ụdaume na -emepe emepe (a ga -akpọ E dịka "è" dịka ọmụmaatụ) wee mebie. Enweghị nnukwu ihe isi ike maka ndị na -asụ French nọ ebe a, ebe anyị nwekwara ụda mkpọtụ n'asụsụ anyị.
Mgbochiume ndị na -agbanwe ụda ha ^
Dịka m kwuru na mbụ, a na -akpọkarị mgbochiume B, F, J, K, L, M, N, P, Q, V, W, X na Z dị ka French. Akwụkwọ ozi H na -agbachikwa nkịtị, dịka n'asụsụ French.
Agbanyeghị, ụfọdụ mkpụrụedemede nwere ike gbanwee ụda ha. Enweghị ọtụtụ, mana ịmara ha nke ọma dị mkpa maka ịmara ịkpọpụta Portuguese Portuguese. Ugbu a anyị ahụla mkpụrụedemede niile na -anaghị ewetara nsogbu ịkpọ okwu Portuguese, nke a bụ ndị ga -achọ ntakịrị mbọ:
Akwụkwọ ozi C ^
Akwụkwọ ozi C na -eso otu omume ahụ na French:
N'isochi ụdaume A, O na U soro, a na -akpọ mkpụrụedemede C / k / dị na kọfị (kọfị) ma ọ bụ casa (ụlọ)
Na -esochi ụdaume E na nke m, a na -akpọ mkpụrụedemede C / s / dị na centro (etiti)
Enwekwara mkpụrụedemede Ç nke akpọrọ dị ka French, ọnọdụ ọ bụla. Ọmụmaatụ: França (France)
Akwụkwọ ozi D ^
A na -akpọ leta a "dj" mgbe mkpụrụedemede I ma ọ bụ leta E na -esote ya mgbe ọ nọ na njedebe okwu, dịka na onde (ebe) ma ọ bụ dia (ụbọchị)
Akwụkwọ ozi G ^
Dịka mkpụrụedemede C, akwụkwọ ozi a na -akpa agwa dịka ọ dị n'asụsụ French:
Na -esochi ụdaume A, O na U, a na -akpọ leta G / g / dị ka garrafa (karama)
Soro ụdaume E na nke m na -eso, a na -akpọ leta C / Ʒ / dị ka girafa (girraaf)
Akwụkwọ ozi R ^
A na -akpọ Portuguese R (sitere na Brazil) n'ụzọ atọ dị iche iche:
Na mbido mkpụrụokwu, a na -akpọ ya dị ka ajụọ H, dị ka bekee ma ọ bụ German.
N'etiti okwu a na -afụkarị ya, dịka na verde (akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ)
Mgbe ejiri okpukpu abụọ ("RR"), a na -akpọ ya dịka French R - carro (ụgbọ ala), ma ọ bụ H - cachorro (nkịta) kubie ume.
Ụda ndị a - ewezuga French R - abụghị ihe ebumpụta ụwa maka ndị na -asụ French, mana ọ dị mfe ịmụta ya na obere omume. Yabụ, egbula oge ime ihe!
Akwụkwọ ozi S ^
Dịka n'asụsụ French, mkpụrụedemede S nwere ike nwee ụda dị iche iche dabere n'ọkwa ya na otu okwu:
na mbido okwu ma ọ bụ mgbe ejiri ya okpukpu abụọ, a na -akpọ ya / s /, dịka na sol (anyanwụ);
n'etiti ụdaume abụọ, a na -akpọ ya / z /, dịka na casa (ụlọ).
Akwụkwọ ozi T ^
A na -akpọkarị leta a dị ka French T. Agbanyeghị, n'asụsụ Portuguese nke Brazil, a na -akpọ mkpụrụedemede T nke na -esote mkpụrụedemede m ma ọ bụ leta E na njedebe okwu "tch", dị ka gente (gens).
Akwụkwọ ozi etinyere ^
N'asụsụ Portuguese, enwere ike imesi ụdaume ike. Ụda olu (ili, nnukwu, circumflex, tilde) nwere ike nwee ọrụ dị iche iche dabere n'okwu dị n'ime ha. A na -eji ha, n'etiti ihe ndị ọzọ, iji:
ọdịiche okwu abụọ nwere otu mkpoputa: pode (ọ nwere ike) vs pôde (ọ nwere ike)
gosi ebe ụdaolu dị mgbe ọ naghị agbaso iwu n'ozuzu: máquina (igwe), útil (bara uru)
gosi mkpọpụta nke otu ụdaume: cão (nkịta), mãe (nne)
gosi akara mkpesa nke ụdaume abụọ n'etiti okwu abụọ na -aga n'ihu: a + aquela ⇒ àquela (nke ahụ), a + a ⇒ ka (ka ...)
kaa ntakịrị mgbanwe na mkpọpụta okwu: pêlo (ntutu), pôr (ka ọ dị, itinye)
Ya mere, ọ dị mkpa iburu ịkpọpụta okwu Portuguese nke ọma, yana nsụpe okwu iji mụta nke ọma.
Ili na nnukwu ụda olu na ịkpọ okwu Portuguese ^
Portuguese bụ asụsụ tonic, n'adịghị ka French, nke bụ asụsụ “dị larịị” karịa. A na -eji ụdaolu egosi ma ebe etinyere ụdaolu, kamakwa iji gbanwee ụda. A na -akpọpụta ụdaume nwere ili ma ọ bụ ụda olu n'ihu ọha. Dịka ọmụmaatụ, a na -akpọpụta mkpụrụedemede O dị ka O na “apple” (ọnụ mepere emepe): avó (nne nne).
A na-edozịkarị olu olu maka nsachapụ nke okwu mmeghe a na okwu ndị bidoro na a-. Dịka ọmụmaatụ, kama ide aa ma ọ bụ aas, anyị na -ede à ma ọ bụ às (à la).
Ụda okirikiri bụ mkpọpụta okwu Portuguese ^
Ụda okirikiri okirikiri n'asụsụ Portuguese nwere otu ọrụ dị ka nke French: ọ na -agbanwe ụda ụdaume na -eburu ya. Ya mere, a na -eji ọnụ mechie obere ụda ahụ.
A na -akpọ tilde n'asụsụ Portuguese ^
A na -eji tilde ụfọdụ ụdaume emegharị ụda ha. Ụdaume nke na -ebu ya na -aghọzi nke na -adịghị ahụkebe.
Ngwakọta akwụkwọ ozi n'asụsụ Portuguese ^
Myirịta ọzọ dị na French, enwere mkpokọta mkpụrụedemede abụọ ma ọ bụ atọ nke ịkpọpụta okwu na Portuguese na -agbanwe. Nke a bụ ka esi akpọpụta otu mkpụrụedemede ndị a n'asụsụ Portuguese:
Ndị otu mgbochi ^
CH> Dịka n'asụsụ French, nchikota mkpụrụedemede C na H na -enye ụda / ʃ / nke “nkata”, ma ọ bụ chamar (ịkpọ) na Portuguese
LH> A na-akpọ otu mkpụrụedemede a / ʎ / ma ọ bụ dị ka "ọrịa" na French ma ọ bụ Spanish: filho (nwa)
NH> A na -akpọ otu mkpụrụedemede a / ɲ / ma ọ bụ “gn”: amanhã (echi)
ÇC> A na -akpọ nchikota mkpụrụedemede a / ks /
Otu ụdaume ^
Ngwakọta akwụkwọ ozi a na -ebute ụda imi, dị ka ụda French -on, -an, -in. Ịkpọ okwu Portuguese nke ụda ndị a yikwara nke ukwuu!
ÃE> otu akwụkwọ ozi a na -amalite site na ụda / a /, wee miefe ngwa ngwa wee ruo ụda “n'ime”: mãe (nne)
ÃO> Nchikota mkpụrụedemede a na -amalitekwa site na ụda / a / wee slides ngwa ngwa gaa ụda "na": pão (mgbu)
>E> nke siri ike ikwupụta, nke a na-amalite site na ụda / o / wee jiri nwayọ gbadara gaa ụda "-ing" nke 'ịzụ ahịa' dịka ọmụmaatụ: põe (tinye / tinye).
Mụọ ịkpọ okwu Portuguese ^
Ozugbo ị matara ịkpọpụta mkpụrụedemede ndị ahụ, oge erugo ime ya! Ị nwere ike malite na:
Ka ịkpọpụta nke ọma, zuru ike, gbatịa agba gị, kwugharịa mgbe igwe okwu nke ị na -eji n'olu dara ụda, ma mee ka ịkpọpụta okwu gị gabiga ókè. Site n'iji nkeji 5-10 kwa ụbọchị mee nke a, ị ga-ahụ ọganihu ngwa ngwa! Cheta na ebumnobi ya bụ ime ka ị ghọta onwe gị yana ịghara ịkpọpụta okwu nke ọma. Ka ị na -emekwu ihe, ka ị na -ekwukwu okwu, otú ahụ ka ị ga -emekwukwa ụdaolu gị! Ndị obodo na -enwekarị ekele maka ikwu okwu n'asụsụ mba ọzọ (asụsụ ala ha) na inwe obere olu.
Ọ bụrụ na akụkọ a masịrị gị ma chọọ ịmụba ihe ọmụma nke Portuguese Portuguese, nke a bụ ụfọdụ aro nwere ike ịmasị gị:
Bido meziwanye asụsụ Portuguese gị
Ị chọrọ ịkwalite asụsụ Portuguese gị?
Ozi Ọma nke Mbụ: Anyị nwere ike nyere gị aka Ozi nke abụọ: Ị nwere ike bido ugbu a n'efu! Mee ka nnwale nnwale gị rụọ ọrụ, wee nwee ọ enjoyụ usoro a dị irè maka ịmụ asụsụ Portuguese ụbọchị iri na ise.
site Tranquillus | Jul 13, 2021 | Na weebụ |
Ịmụta ịsụ asụsụ nke ọma adịghị ka ịmụ ịnya igwe: enwere ike chefuo ya. Yabụ kedu ka ị ga -esi debe ọkwa gị n'asụsụ Bekee mgbe ị naghị enwekarị ohere ịmụ asụsụ Shakespeare? Ma ị bi naanị n'agwaetiti ọzara ma ọ bụ n'obodo mepere emepe, anyị achịkọtala ndepụta dị mkpirikpi nke ụzọ dị mfe iji wee nwee ọkwa dị mma na Bekee… na -enweghị nnukwu mbọ.
Ndụmọdụ ndị a niile na -eche na ị nweela ike ịsụ Bekee nke ọma n'oge ụfọdụ na ndụ gị. Nke ahụ bụ, nwee ahụ iru ala ịghọta onye na -asụ Bekee ma zaghachi ya na -enweghị ịchọ okwu gị n'oge mkparịta ụka, ma ọ bụ ndụ kwa ụbọchị ma ọ bụ isiokwu dị mgbagwoju anya. Ọ bụrụ na ị nwere ike dee akụkọ ndụ gị na Bekee, ị nwere ike ịsụ Bekee nke ọma. Nke a, ọbụlagodi na ịnweghị ike ịgafe uzommere ratatouille n'ihi na ị maghị aha bekee nke ihe niile mejupụtara (eggplant, zucchini, tomato, garlic, pepper green, pepper red, pepper, salt, 'bouquet garni').
Nke a bụ ihe fọrọ nke nta ka ike agwụ ndepụta nke niile kwere omume ụzọ ịnọgide na-enwe gị larịị nke English, ma ọ bụ ọbụna na-eme ka gị okwu ma ọ bụrụ na ị na-eme mgbalị anya na a akwụkwọ ọkọwa okwu maka okwu na idioms nke ị na-agaghị aghọta.
1. Idenye aha n'akwụkwọ akụkọ / akwụkwọ akụkọ / akwụkwọ akụkọ n'asụsụ Bekee
Mgbe ha na -abanye ọmụmụ gụsịrị akwụkwọ, a na -adụkarị ụmụ akwụkwọ France ọdụ ka ha denye aha na magazin Time. Ọ bụ ezi echiche; mana ha na -ahapụkarị ịgụ akwụkwọ kwa izu maka enweghị oge, ma ọ bụ enweghị agụụ. Karịsịa ebe ọ bụ na oge nwere ike isi ike mgbe ụfọdụ, ọbụnadị ịkpọ nkụ.
Yabụ denye aha na akwụkwọ akụkọ, akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ ọbụna akwụkwọ akụkọ dị mfe nke na -atọ gị ụtọ - ma ọ bụ nri, egwuregwu vidiyo, ịkọ ugbo, ego ma ọ bụ cryptocurrency. Ọbụghị naanị na ị ga -ejigide ọkwa Bekee gị na -enweghị nnukwu mbọ, mana na mgbakwunye, ị ga -akwakọba okwu nka nke ga -aba uru na ndụ ọkachamara gị.
2. Na -arụ ọrụ na ndị na -asụ Bekee ka o kwere mee
Ọ dị mfe karịa ime ya, ịnọnyere ndị na -asụ Bekee bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọ bụ ụzọ kachasị mma iji jigide ọkwa Bekee gị. Ị nwere ike ịdebanye aha maka nnọkọ, nabata ndị ọbịa zuru oke site na Couchsurfing, bụrụ onye na -elekọta kọfị na mpaghara ndị njem, wdg.
3. Njem / mbịarambịa / were WHV n'obodo na-asụ Bekee
Ndị na -erubeghị afọ 35 nwere ike irite uru na mmemme ezumike ọrụ (WHP) - ngwugwu nkwekọrịta na -enye ha ohere ịga mba ọzọ ịga njem na ịrụ ọrụ n'otu oge. Francophones nwekwara ike nọrọ otu afọ ma ọ bụ abụọ n'ime mba iri na isii dị iche iche: Australia, Canada, New Zealand, wdg.
4. Dee akwụkwọ edetu gị n'asụsụ Bekee
Ndị na -edebe akwụkwọ edetu (ma ọ bụ akwụkwọ edetu) chọrọ naanị dee ihe edeturu ha n'asụsụ Bekee ka ha wee nwee ọkwa Bekee ha, ọ bụrụgodi na ọ bụ naanị otu ibe kwa ọnwa.
5. Dee memos, ndepụta ịzụ ahịa na ndepụta ihe ị ga-eme na Bekee
Dị ka ndụmọdụ gara aga, ụzọ dị mfe iji jigide ọkwa Bekee gị bụ ide ihe niile dị obere ụbọchị kwa ụbọchị n'asụsụ Shakespeare: ndepụta ịzụ ahịa, ndepụta ime, ndepụta ndepụta, ndepụta ndepụta. '' na gị na ngwụsị izu ma ọ bụ njem, wdg. N'ihi aghụghọ a, ị gaghịzi echegbu onwe gị maka ibugara ụwa niile usoro nri ratatouille.
6. Lelee ihe nkiri na usoro n'asụsụ Bekee ka ịchekwa ọkwa Bekee gị
Ikiri ihe nkiri ma ọ bụ usoro n'ụdị nke mbụ ha bụ otu n'ime ụzọ a na -ahụkarị iji debe ọkwa Bekee gị.
7. Gụọ akwụkwọ akụkọ na edemede na Bekee
Nke a bụ ụfọdụ akwụkwọ anyị na -akwado ka ị gụọ na 2019.
8. Gaa na saịtị ozi na-asụ Bekee kwa ụbọchị ka ị nọgide na-asụ Bekee
Kama ịga na-agụ Le Monde kwa ụbọchị, gịnị ma ị were ịgụ akwụkwọ gị na nke akwụkwọ akụkọ Bekee dị ka New York Times, Politico ma ọ bụ onye nche? Ọbụghị naanị na ị ga-achịkọta okwu na okwu adịghị mma, mana nke kachasị, ị ga-enwe echiche dị iche na akụkọ karịa nlele Franco-French nke mgbasa ozi France.
9. Gee pọdkastị ma ọ bụ akwụkwọ ọdịyo na Bekee
Pọdkastị bụ oke iwe, na n'isiokwu a anyị na -ewetara gị ndepụta pọdkastị kacha mma ịge ntị na Bekee.
10. Tinye ekwentị / kọmputa / akaụntụ Facebook gị n'asụsụ Bekee
Ịgbanwe asụsụ ekwentị gị, kọmputa gị, akaụntụ Facebook gị, ma ọ bụ igwu egwuregwu vidiyo na Bekee, na -enye gị ohere ịnọnyere asụsụ Bekee na ọnụ ala. Aghụghọ a, naanị ya, ezughi oke idobe ọkwa ya.
11. Gee redio na Bekee
Biko mara: nke a abụghị maka ige ntị pọdkastị. Ige redio ndị na-asụ Bekee, ibi ndụ, na ịntanetị ma ọ bụ na redio gị, bụ ụzọ dị oke mma iji jigide ọkwa Bekee gị oge niile (ebe ọ bụ na ị nwere ike ịme ihe ndị ọzọ n'otu oge) yana ịrụsi ọrụ ike (ọ bụrụ na ị na-etinye uche opekata mpe gee ihe a na -ekwu kama ịnwe redio dị ka ụda ndabere dị mfe). Ọ bụrụ na ị ghọtaghị ihe niile (ma ọ bụ karịa na mbụ), nke ahụ zuru oke. N'ime ọtụtụ ọnwa, ị ga -achọpụta na ị na -eme obere mbọ iji ghọta, na ọkwa Bekee gị ga -akawanye mma nwayọ!
BBC na Voice of America bụ ụlọ ọrụ redio kacha mara amara, mana enwere nde ndị ọzọ.
12. Debanye aha na ọwa Youtube / ibe FB / akaụntụ Instagram & Twitter
N'isiokwu a, ị nwere ike gụọ akụkọ anyị na ọwa Youtube kacha mma.
13. Chọta onye nta akụkọ na-asụ Bekee
Ịchọta penpal ma ọ bụ onye nta akụkọ na-asụ Bekee dị mfe ugbu a na ịntanetị. Enwere ọtụtụ saịtị pụrụ iche dị ka PenPal World ma ọ bụ Mylanguageexchange - mana ọ bụrụ na ịchọrọ “ezigbo” penpal, ya bụ ị ga -ekwu onye gị na ya ga -agbanwe ezigbo akwụkwọ ozi zitere site na nzipu ozi, ị ga -echigharịkwuru ụlọ ọrụ nke bụ International Pen Friends.
14. Na -ejikwa Couchsurfing na -anabata ndị ọbịa
Ụkpụrụ Couchsurfing dị mfe: nabata ndị bịara abịa zuru oke n'ụlọ, ọ bụrụhaala na ịchọrọ. Nleta ndị a bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ohere iji gbanwere nri, ọrụ, nleta, oge gị na ndị mmadụ sitere n'akụkụ ụwa niile.
15. Gaa n'omume ịmụta mkpụrụ okwu iri n'ụbọchị n'ụbọchị iji mee ka ọkwa Bekee gị ka mma
Omume nke chọrọ ịdọ aka na ntị dị ukwuu, mana nke na -enye gị ohere ijigide ọkwa Bekee gị yana ime ka ihe ọmụma asụsụ gị ka mma.
16. Mụọ uri kwa izu
Dịka François Mitterand, ịmụ abụ n'isi kwa izu bụ ezigbo mgbatị ahụ maka ịrụ ọrụ ncheta gị. Ime ya na Bekee bụ ihe ịma aka na -akpali akpali karịa, ebe amaokwu ndị ị na -amụta ga -abụ ndị enyi ntụgharị uche zuru oke.
17. Gụọ akwụkwọ asụsụ abụọ
Ịgụ akwụkwọ n'asụsụ Bekee bụ ụzọ dị mma iji jigide ọkwa Bekee gị. Mana ịgụ akwụkwọ ndị ebipụtara na mbipụta asụsụ abụọ kadị mma, n'ihi na ntụgharị asụsụ na -enye gị ohere igosipụta nghọta asụsụ gị nke ọma.
18. Dee obere akụkọ maka ụmụaka ma ọ bụ obere akụkọ na Bekee
Ọ bụrụ na ị nwere mkpụrụ obi nke onye edemede na -eto eto, ide akụkọ mkpirikpi n'asụsụ Bekee bụ ihe na -atọ ụtọ na nnukwu ụzọ iji meziwanye Bekee gị. Anọla ịma onwe gị gbasara njiri mara mma: ihe dị mkpa bụ imepụta akụkọ, ọbụlagodi na ọ dị anya ma ọ bụ enweghị mmasị n'anya gị!
19. Isi nri na Bekee
Maka ndị nwere mkpụrụ obi onye na -esi nri, ị nweta ma na -emikpu onwe ha n'ime akwụkwọ nri e dere n'asụsụ Bekee na -arụ ọrụ nke ọma n'ịdokwa ọkwa Bekee.
20. Abụ na bekee
N'ikpeazụ, ndụmọdụ kachasị mfe iji mee ka ọkwa Bekee gị ka mma bụ ịgụ abụ. Mana kpachara anya: ọ bụghị naanị ajụjụ ịmanye egwu na ịsa ahụ, mana ị toa ntị n'okwu ndị ahụ, ghọta ha, tụgharịa asụsụ ha, gosipụta ha. Site n’iburu abụ n’isi, na -abụ ha mgbe niile, na nghọta nghọta nke ederede ndị omenkà dere, ị gaghị enwe nsogbu idobe Bekee gị nke ọma.
site Tranquillus | Jul 5, 2021 | Na weebụ |
Etu esi ede CV gị nke ọma na Bekee? Site na mmalite nke afọ akwụkwọ na mmalite nke afọ ọhụrụ, ọtụtụ ụmụ akwụkwọ na-achọworị ụlọ akwụkwọ na mba ọzọ, ma ọ bụ ọrụ ndị na-adịghị mma iji nweta ego n'oge afọ dị iche ma ọ bụ afọ Erasmus.
Ya mere, nke a bụ ihe na-erughị ndụmọdụ iri na anọ ga-enyere gị aka ide CV kacha mma na Bekee. Anyị ga-ebu ụzọ tụlee isi esemokwu isii nwere ike ịdị n’etiti CV ndị French na Bekee, ma mechaa jiri ndụmọdụ 6 izugbe metụtara ụdị ahụ.
Etu esi ede ezigbo CV na bekee?
Isi ọdịiche isii dị n'etiti CV French na Bekee CV
1. Onwe "nchịkọta"
Nke a bụ isi ihe dị iche na French CV na Bekee CV: nchịkọta nke profaịlụ nwa akwukwo gị, na paragraf mmeghe, n'elu CV gị.
Nke a bụ ngalaba kachasị mkpa nke CV gị na bekee, maka na ọ bụ ihe mbụ (na mgbe ụfọdụ, naanị) ihe onye na-ewe mmadụ ga-agụ. Ga-enwerịrị ike ịpụ apụ, gosipụta mkpali gị, wepụta onwe gị n'ọrụ na otu, ma gosipụta ikike gị ... niile na ahịrịokwu abụọ ma ọ bụ atọ.
Otu ihe atụ nke onyinye ọrụ na Bekee:
Onye njikwa njikwa ahụmihe nwere ahụmihe na ahụmịhe IT ukwu. Nkà gụnyere njikọta kọmputa, echiche nyocha na idozi nsogbu nsogbu. Ike itinye echiche nke ndị ahịa na IT iji melite ahụmịhe ndị ọrụ maka ndị ahịa, ndị ọrụ na nchịkwa.
2. Ihe dị mkpa ọkachamara na ahụmịhe onwe onye
N'adịghị ka France, mba Anglo-Saxon na-ahụkarị ahụmịhe ọkachamara na ahụmịhe onwe onye, ​​karịa ogo mahadum na aha.
Ahụmịhe ọkachamara ga - abụ ngalaba kachasị ukwuu nke CV gị, ebe ị ga - akọwa ọrụ gị n'ụzọ dị mma, yana usoro mgbe niile. Akụkụ a kwesịrị ịgụnye ihe ndị a:
Aha ụlọ ọrụ ị rụrụ maka ebe ị rụrụ ọrụ ụbọchị ndị ọrụ gị Ọrụ ị jidere, yana aha gọọmentị nke nkọwa ọrụ yana, nke kachasị mkpa bụ ndepụta nwere ngwaa na isi data, ịkọwapụta ọkachamara ahụ. rụzuru nke kachasị dị mkpa na ngwa gị
Yabụ, iguzo, ị nwere ike itinye data doro anya nke nsonaazụ ọkachamara gị: ịrị elu 83% na ahịa mgbe ị bụ onye na-ere ahịa, ide akwụkwọ ọcha, wdg. Kpachara anya ka ị ghara imebi ihe nzuzo ndị ọkachamara nke ị nwere ike ịdabere na oge ọrụ gị gara aga.
3. Nkà ndị dị nro
Ihe ọzọ dị iche iche nke CVs na Bekee bụ mkpa ọ dị nzụlite dị nro, nke bụ n'ezie agwa mmadụ bara uru n'ọtụtụ ọrụ dị iche iche, dị ka mgbanwe, nkwanye ugwu, ikike nke nkwukọrịta, wdg.
Dọ aka na ntị: ezughị ezu itinye "Nduzi" maka onye na-ewe mmadụ n'ọrụ ka ị tụlee gị dịka onye isi otu ndị otu. Niile nkà ị tinyere na CV gị ga-enwerịrị ike igosipụta site na ahụmịhe na-aga nke ọma ma gbaa akaebe! Ọ bụrụ na ị kwuo na ị nwere ike imepụta ihe, ohere ọ ga-adị mma bụ na n'oge a na-agba ajụjụ ọnụ, onye na - ewe gị n'ọrụ ga - agwa gị ka ị kwuo otu oge ị bụ okike.
Otu n'ime ọrụ nro kachasị dị nro bụ:
Nkwukọrịta Oge Nhazi Mkpebi Ngbanwe Onwe-Ume NduziRaazi ỌrụTabụ rochọta nsogbu / Creativemepụta echiche Ike Arụ Ọrụ Na Nrụgide
Na isiokwu a, lee ndụmọdụ atọ anyị na-ekwu maka ịsụ bekee n ’ọrụ!
4. Ogo abụghị ihe dị mkpa
N'adịghị ka CV French, CV Bekee ga-etinye ngalaba "Mmụta" ikpeazụ, na ala nke CV. Ma, mgbe mgbe, nwa akwukwo a ga-enwe afọ ojuju itinye diplọma ya kachasị ọhụrụ, ma ọ bụ nke kachasị mkpa. Yabụ tinye mahadum nke ị gụsịrị akwụkwọ, yana aha ogo gị kacha elu.
Ọ dịghị mkpa itinye akwụkwọ baccalaureate gị, ikike gị ma ọ bụrụ na ị nwere ogo mmụta, nna ukwu gị ma ọ bụrụ na ị nwere doctorate, wdg. Ọ gwụla ma ọ dị mkpa, ọ bụrụ na atụ, a zụọla gị n'akụkụ abụọ na-arụkọ ọrụ ọnụ.
5. Na United States, ịkwado foto anaghị atụ aro.
N'izugbe, ọ bụ ihe a na-ahụkarị ịchọta foto paspọtụ na CVs na Bekee. Agbanyeghị, nke a ka nwere ike ịdị mkpa maka ọrụ dịka onye nlekọta ma ọ bụ nnabata nnabata.
6. Nkwado ndị ọkachamara
N'ikpeazụ, ihe ọzọ dị iche iche nke CV na Bekee bụ, mgbe ụfọdụ, ọnụnọ ndị ọkachamara. N'ezie, na ngalaba "Ahụmahụ", ọ nwere ike ịdị mkpa itinye aha, adreesị ozi-e, na akara ekwentị nke onye ga-ekwenye iji gosipụta nkà gị na ụdị onye ị bụ.
O nwere ike ịbụ onye bụbu onye isi gị, onye njikwa mbụ gị, prọfesọ mahadum, onye na-ahụ maka egwuregwu gị, onye ọ bụla metụtara ọrụ gị n'ọdịnihu.
Echefukwala ịgwa ndị a na ị tinyela aha ha na kọntaktị ha na CV gị, ma ọ bụghị na ị ga - enweta ihe ijuanya na - adịghị mma.
Ihe anaghị agbanwe agbanwe: Ndụmọdụ 8 maka ide CV gị na bekee
Kedu ihe na-anaghị agbanwe agbanwe? Ihe niile! Ndị a bụ ụfọdụ ndụmọdụ izugbe maka ide ezi CV na Bekee ma ọ bụ French:
Jiri mpempe akwụkwọ dị mfe ọgụgụ, adịghị mma, ma ghara ịga n'okpuru 11pt. ​​Tinye n'akụkụ n'akụkụ opekata mpe otu sentimita. Gbalia itinye oghere ọcha n'etiti akụkụ CV gị dị iche iche. CV nwere atụmatụ nke oge a ma ọ bụ ihe ndozi. Iji agba agba ga-ekwe omume, mana idobe ya. Ọ bụrụ na izipu ngwa site na La Poste ma ọ bụ ọ bụrụ na ị nyefee CV gị, gbaa mbọ bipụta ya na ezigbo akwụkwọ, yana gramage nke 80g / m². Jikwa mma ink dị mma, ọbụlagodi na ọ pụtara ịga na onye nbipute ọkachamara Ọ gwụla ma achọrọ ya kpọmkwem, ezigala CV gị na PDF. Ndị na-eweghachi ọrụ na-ejikarị ngwanrọ arụ ọrụ iji nyochaa nyocha, na ngwanrọ ahụ enweghị ike ịgụ PDFs nke ọma.Ọ gwụla ma ị nọ na agụmakwụkwọ ma ọ bụ nyocha ahụike, mmalite gị ekwesịghị ịbụ karịa otu peeji ma ọ bụ abụọ. Ọ gwụla ma ị na-achọ maka ọnọdụ nlekọta ndị okenye, jigide naanị otu ibe maka mmaliteghachi gị. Ọ dị mkpa igosipụta mmụọ ụfọdụ nke njikọ na arụmọrụ.
site Tranquillus | June 30, 2021 | Na weebụ |
Iche echiche n’asụsụ ọzọ na-abụghị asụsụ obodo gị bụ ihe ịma aka mgbe ị na-amụ asụsụ mba ọzọ. Ọ bụrụ n’abụghị ebe ahụ, ị ​​ga-ahụ na ị ga-achọ ịtụgharị ihe niile dị n’isi gị, sụgharịa asụsụ gị na asụsụ gị. Nke a nwere ike ngwa ngwa na-ewe oge, na ọ bụghị ezigbo oru oma! Yabụ kedu ihe ị ga - eme iji zere ime ya wee nwekwuo obi ike na ntụkwasị obi? Abbe nwere usoro dị iche iche ga - enyere gị aka ịmalite iche echiche n’asụsụ gị. Ọ ga-enye gị ndụmọdụ gbasara otu ị ga-esi kwụsị ịtụgharị asụsụ isi gị.
site Tranquillus | Apr 12, 2021 | Na weebụ |
Mgbe anyị na-ekwu maka asụsụ ọdịnihu, anyị na-akpalite Chinese, mgbe ụfọdụ Russian, Spanish. Arabic anaghị adịkarị mfe, asụsụ a na-echefukarị. Ọ bụghị na ọ bụ onye na-agbasi mbọ ike maka aha ahụ? Ọ bụ otu n’ime asụsụ ise a kacha asụ n’ụwa. Asụsụ nke sayensị, nka, mmepeanya na okpukperechi, Arabụ nwere nnukwu mmetụta na omenaala ụwa. Kwa afọ, na-agbaso ọdịnala ya, asụsụ Arab na-aga n'ihu na-eme njem, iji baa ọgaranya ma nwee mmasị. N’etiti Arabic nkịtị, ọtụtụ asụsụ ya na mkpụrụedemede a pụrụ ịmata n’ụwa niile, kedụ ka a ga-esi kọwaa ịdị mkpa nke asụsụ a na-enweghị isi? Babbel na-etinye gị n'okporo ụzọ ahụ!
Ebee ka a na-asụ asụsụ Arabik n ụwa?
Arabic bụ asụsụ gọọmentị nke mba iri abụọ na anọ na otu n'ime asụsụ gọọmentị isii nke United Nations. Ndị a bụ steeti 24 nke Arab League, tinyere Eritrea na Chad. Ọkara obodo ndị a na-asụ Arabic nọ na Africa (Algeria, Comoros, Djibouti, Egypt, Eritrea, Libya, Morocco, Mauritania, Somalia, Sudan, Chad na Tunisia). Nkera nke ọzọ dị na Asia (Saudi Arabia, Bahrain, United Arab Emirates, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestine, Qatar, Syria na Yemen).
Arabic, Turkish, Persian ... ka anyị were ngwaahịa! Ihe ka n'ọnụ ọgụgụ ndị na-asụ Arabic bụ ndị Alakụba - na Arabic bụ asụsụ nke Koran - ihe mgbagwoju anya bụ ịgbagha asụsụ Arabik na Islam. Mba ndị Alakụba kachasị ukwuu n'ụwa, adịghị asụ Arabic ebe ọ bụ Indonesia. Arabic bụ asụsụ Semites. N'adịghị ka nkwenye a ma ama, ọ nweghị njikọ ezinụlọ ya na Turkish - nke ga-abụ nke otu asụsụ Altaic. Persian ma ọ bụ Farsi, asụsụ mbụ nke Iran, enweghị njikọ na Arabic. Ọ bụ asụsụ Indo-European… dị ka French! N'otu aka ahụ, na Afghanistan, asụsụ abụọ ndị ka n'ọnụ ọgụgụ bụ asụsụ ndị Iran: Dari na Pashto. Omume nke asụsụ Arabic dị obere n'ime ebe ahụ, n'azụ Uzbek ma ọ bụ Turkmen. Edebere ya maka okpukpe na azụmaahịa mba ofesi na Middle East.
Na Babbel, anyị ejirila usoro iwepụ ihe ederede mara anyị ahụ. Mkpụrụedemede Cyrillic anaghị achọ mmụta karịa ụbọchị abụọ. Anyị Alphabet World Tour ewepụla anyị na Caucasus gaa Korea Peninsula. Banyere mkpụrụedemede Arabic… ọ bụghị mkpụrụedemede n'echiche nke anyị ji ghọta ya maka mkpụrụedemede Latin! A na-akpọ ha abjad ma ọ bụ mkpụrụ akwụkwọ mkpụrụedemede, mkpụrụedemede Arabic na-edekarị mgbochiume. Edere ya ma gụọ ya site n’aka nri gaa n’aka ekpe ma nwee mkpụrụ akwụkwọ iri abụọ na asatọ.
Enwere ike ịchọta sistemụ ederede a n'asụsụ ndị ọzọ, ọkachasị Persia, Kurdish na Urdu. Kemgbe afọ 1000, Uyghurs ejirila ya. Ruo 1928, ọ rụrụ ọrụ dị ka nsụgharị na Turkish nke jirila mkpụrụedemede Latin mee ihe.
Literal Arabic na olumba Arabic
Arabic bụ n'ezie ihe atụ kachasị mma nke diglossia. Diglossia bu na asusu na-ekewa otutu mpaghara di iche-iche, nke bu ihe nghari na ya mgbe ufodu. Arabic, dika asusu, nwere ike gosiputa ihe abuo di iche: Arabic nke oma n’otu aka, Arabic nke ozo.
Literal Arabic bụ aha enyere asụsụ etolite. Nchịkwa na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ọ bụ nke ahụ ka amatara dị ka asụsụ gọọmentị nke mba ndị na-asụ Arabic. Ọ bụkwa na nke onye okụt ke Koran, na mgbasa ozi na kpọmkwem ụtọ asụsụ. Ọ na-achịkwa nkwukọrịta ederede na nke iwu, n'okpukpe na mgbanwe mba ụwa. Mana n'eziokwu, ọ dịghị onye nwere asụsụ Arabik dịka asụsụ ala nna ha. Olumba Arabic bụ asụsụ eji ekwu okwu ọnụ na ndụ ụbọchị niile. Ọ na-ewe ụdị dị iche iche site n’otu ókèala gaa n’ọzọ.
Gini kpatara diglossia a? Ọ bụ mkpụrụ nke akụkọ ihe mere eme, mmekọrịta mmadụ na ọchịchị. Dị ka asụsụ niile dị ndụ, asụsụ Arabik gbanwere oge. Asụsụ uri nke ghọrọ asụsụ okpukpe site na narị afọ nke asaa gaa n'ihu, ọ meriri oke ókèala nwere mmetụta dị iche iche. Olu asụsụ ochie ndị na-apụchabeghị kpamkpam agbanweela iji jikọta ya na Arabic. Coptic ke Egypt, Berber ke Maghreb, Aramaic ke Syria… Akụkọ banyere asụsụ Arab bụ akụkọ ihe mere eme banyere mpụga na mmụba ọdịbendị. Ka anyị leba anya n'asụsụ Arabic.
Kedu asụsụ ndị bụ isi nke asụsụ Arabik?
Ederede olumba nke asụsụ Arabik mere n’ọ ọkwa dị iche iche. Ndị ọkà mmụta asụsụ nwere mmasị na ụzọ nke mpaghara. A ga - enwe Western Arab dị ka Arab Arab. Mana ọbụlagodi na mpaghara ya, enwere ọtụtụ iche. Ruo n'ókè ụfọdụ ịhapụ nhazi gaa n'asụsụ dị iche iche iji kwado asụsụ asụsụ.
Western Arabic na Western Arabic
Western Arabic, ma ọ bụ Maghrebian Arabic, na-akọwa asụsụ dịgasị iche iche dị ugbu a - na mkpụrụedemede nke ókèala - na Algeria, Libya, Morocco, Mauritania na Tunisia.
Site na iwepu ego, mpaghara ndị ọzọ na-asụ Arabic jikọtara na Western Arab. Anyị nwere ike ịmata ọdịiche dị n ’etiti asụsụ asụsụ anọ ndị a:
- Arabik nke ndi Egypt;
- Arabic nke Mesopotamia, tumadi na Iraq;
- Arabic Levantine, na Syria, Lebanon, Palestine na Jọdan;
- Peninsular Arabic, nke jikọrọ nke ndị ọzọ na-asụ asụsụ Arabik nke Arab Peninsula.
Olu asụsụ Arabik: ụfọdụ atụ
N’asụsụ Arabik dị n’asụsụ Algeria, asụsụ ala nna nke ihe dị ka nde mmadụ iri anọ na-asụ, ụfọdụ ụdaume na-apụ n’anya. Iji maa atụ, a na-akpọ okwu ahụ سماء (s'ama, sky) s'ma. N'aka nke ọzọ, Arabic Arabic ga-anọgide na-ekwenyekarị na Arabic nkịtị na ịkpọ okwu. Ihe atụ ọzọ: كيفاش؟ (kifach, olee otu?), وقتاش؟ (weqtach, olee mgbe?) na ebumnuche itinye -ach na njedebe nke okwu ajuju na Arabic Algerị na Arabic Moroccan. Na Lebanọn ma ọ bụ Ijipt, a na-akpọ onye nwe ya kif.
Gịnị bụ arabizi?
Ihe akaebe na ngbanwe nke asusu Arabic adighi anya, asusu ohuru putara na 1990. O bu ihe gbasara Arabic, nke apuru ighota dika ngwakọta nke Arabic na Bekee (inglizi na Arabic) dika Frenglish, ma obu dika nkwekorita nke okwu Arabic na mfe. Enweghị mkpụrụedemede Arabị na ekwentị izizi mbu dugara na nnọchi mkpụrụedemede efu efu site na ọnụọgụ. Akwụkwọ ozi "ء" ghọrọ 2, "ع" ghọrọ 3 ma ọ bụ ọbụlagodi "ح" na-aghọ 7. Ihe omume nke na-apụ n'anya taa mana nke mmadụ na-ahụ na netwọkụ mmekọrịta.
site Tranquillus | Feb 16, 2021 | Na weebụ |
You maara na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke ndị bi n'ụwa na-ewere onwe ha dị ka asụsụ abụọ? Onu ogugu a, nke nwere ike iyi ihe ijuanya n’ile anya mbu, ka egosiputara na nchoputa nke asusu abuo nke Ellen Bialystok, onye oka mmuta na onye oka mmuta nke Canada na Mahadum York na Toronto.
Mgbe ọ natara doctorate ya na 1976, nwere ọkachamara na ọgụgụ isi na mmepe asụsụ na ụmụaka, nyocha ya lekwasịrị anya na asụsụ abụọ, site na nwata ruo n'oge kachasị elu. Nwere ajụjụ gbara ọkpụrụkpụ: ịsụ asụsụ abụọ ọ na-emetụta usoro ọgụgụ isi? Ọ bụrụ ee, n'ụzọ dị a ?aa? Ihe ndị a bụ otu mmetụta na / ma ọ bụ nsonaazụ ya dabere na ọ bụ ụbụrụ nwata ma ọ bụ okenye? Olee otú ụmụaka si asụ asụsụ abụọ?
Ọ bụrụ n ’ị na-amụ asụsụ Babbel, ị ga-atụrịrị anya ị nwere ike ịhapụ nkuzi gị niile wee jiri mkpịsị aka gị wee nwee ike ịsụ asụsụ abụọ. O di nwute, nke a enweghi ike!
Ka agbaghara gị, anyị ga-enye gị n’isiokwu a ụfọdụ igodo iji ghọta ihe “ịsụ asụsụ abụọ” pụtara n’ezie, kedu ụdị asụsụ abụọ dị iche iche na, ikekwe, na-akpali gị ịkwalite ịdị mma nke mmụta asụsụ gị.
Kedu ụdị asụsụ asụsụ abụọ dị iche iche?
Gịnị ka ịmụ asụsụ abụọ pụtara? A ga-asị na mmadụ ga-asụ asụsụ abụọ ma ọ bụrụ na ọ ga-enwe ike ịsụ n'asụsụ abụọ, ma n'ụdị na-arụ ọrụ (na-ekwu okwu, na-ede ihe) na n'ụkpụrụ na-enweghị isi (ige ntị, ịgụ). Ma, n'adịghị ka ihe ọtụtụ ndị kweere, onye na-asụ asụsụ abụọ anaghị emecha nke ọma n'asụsụ abụọ ahụ. Nke a na-abụkarị ihe ụmụaka abụọ na-asụ asụsụ abụọ si mba ọzọ kwabata ga-eji asụsụ dị n'ụlọ akwụkwọ ha kwuo maka isiokwu ndị a na-ahụ anya (nka, nkà ihe ọmụma, wdg).
Ọzọkwa, ọ bụ ezie na e nwere ụdị asụsụ abụọ dị iche iche, ha ekwesịghị inwe mgbagwoju anya na ikike ịsụ asụsụ “were were”. Learningmụta ịsụ asụsụ bekee nke ọma na Babbel dị mfe: ọ na-achọ ịnwe ike ịsụ asụsụ a, ọbụlagodi mmejọ ole na ole.
Wayszọ 5 ị ga-asụ asụsụ abụọ ...
Oge ọmụmụ asụsụ na-ekere òkè dị ukwuu na asụsụ asụsụ mmadụ. E nwere ụdị asụsụ ise dị iche iche:
Mkpokọta asụsụ abụọ: ịmụ asụsụ abụọ site na ọmụmụ. Nke a bụ ihe gbasara ndị nwere nne na nna nwere asụsụ abụọ dị iche iche.
Mmalite asụsụ abụọ bidoro: ịmụ asụsụ nke bekee site na ọmụmụ, tupu ịmụ asụsụ nke abụọ site na nwata. Nke a bụ ihe banyere ụmụaka ndị, dị ka ihe atụ, ndị nọọsụ na-elekọta ma na-asụ asụsụ mba ọzọ.
Ọgwụgwụ asụsụ abụọ: ịmụ asụsụ nke abụọ site na afọ 6, site na asụsụ obodo.
Ntinye asụsụ abụọ a na-agbakwunye: mmezu nke asụsụ abụọ site na ọmụmụ asụsụ.
Subtractive asụ asụsụ abụọ: ịmụ asụsụ nke abụọ iji mebie nke mbụ.
... maka ogo 5 nke asụsụ abụọ
Tinyere ụzọ ise ndị a nke ịbụ asụsụ abụọ, e nwere ogo ise nke ịsụ asụsụ abụọ:
Asụsụ asụsụ abụọ nke “eziokwu”: njikwa asụsụ abụọ zuru oke, ikike igosipụta onwe ya na ndekọ niile, na isiokwu niile.
"Semi-asụsụ": ọkwa nke ihe ọmụma nke asụsụ abụọ ahụ nhata, ọ bụrụgodị na asụsụ abụọ ahụ amachaghị nke ọma. Dịka ọmụmaatụ, dịka ọmụmaatụ, maka ụmụaka mụtara asụsụ abụọ n'otu oge.
"Equilingualism": ịsụ asụsụ abụọ ahụ n'otu ụzọ, na-erughị ogo onye na-asụ asụsụ ala ha.
Diglossia: iji asusu obula ede ihe. Na Paraguay, ọ bụ ihe a na-ahụkarị bụ ndị na-asụ ma Guarani (eji ya na ndụ kwa ụbọchị, yana ezinụlọ, ndị enyi, ndị ọrụ ibe ...) na Castilian (eji ya n'ụlọ akwụkwọ, na mmekọrịta mmekọrịta, na usoro iwu administrative). Asụsụ mpaghara dị ka Occitan, Basque, ma ọ bụ Breton nwekwara ike ịda n'okpuru diglossia.
Ntughari asusu abuo: ighota asusu n’enweghi ike ikwu ya. Nke a bụ ihe banyere onye edemede nke usoro ndị a, nwere ikike ịghọta Khmer ọnụ na enweghị ike ikwu okwu, ịgụ ma ọ bụ dee ya.
Nsonaazụ nke asụsụ abụọ na ụbụrụ
Ruo etiti narị afọ nke XNUMX, e boro asụsụ abụọ ebubo ihe ọjọọ niile: kpatara ụmụaka nwere mgbagwoju anya, igbu oge maka ọgụgụ isi, igbochi ịga nke ọma na agụmakwụkwọ na mmekọrịta mmadụ na ibe ya ...
Gụọ na Babbel Magazine: olee otu esi asụ asụsụ abụọ masịrị m!
Taa, onye ọ bụla kwenyere na ịmụ asụsụ abụọ anaghị ewepụta mmetụta ọ bụla na-adịghị mma. Dabere na nyocha nke Ellen Bialystok, anyị nwere ike ịmata ọdịiche dị atọ dị mma nke nsụgharị asụsụ abụọ na ụbụrụ.
Nsonaazụ dị mma
E nwere ụzọ ihe atọ dị mma mmadụ ga-erite ma ọ bụrụ na onye ahụ asụ asụsụ abụọ.
- Oge mgbaàmà nke mgbaka na ọrịa Alzheimer
Otu n'ime ihe ọmụmụ Ellen Bialystok lere anya na ndị mmadụ 450 nwere ọrịa Alzheimer, ha niile nwere otu mgbaàmà ahụ n'oge nyocha. Ọkara nke nlele ahụ bụ ndị na-asụ asụsụ abụọ, na-asụ ma ọ dịkarịa ala asụsụ abụọ na ndụ ha mgbe niile.
Nnyocha ya gosipụtara na ndị ọrịa na-asụ asụsụ abụọ bidoro hụ ihe mgbaàmà nke ọrịa ahụ ka afọ anọ ma ọ bụ ise gachara karịa ndị na-asụ asụsụ abụọ. O kwubiri na ịsụ asụsụ abụọ anaghị agbagha ọgwụ mgbochi Alzheimer, mana ọ na-enye ezumike.
N'otu usoro ahụ, na 2013 onye India na-eme nchọpụta Suvarna Alladi bipụtara otu ọmụmụ metụtara mmadụ 648, na-egosi nsonaazụ yiri ya.
Nkọwa ya ga-abụ na mgbe anyị mere agadi, ịmụ asụsụ abụọ ga-enyere aka ichekwa isi awọ na ọcha, dị mkpa maka ikike nghọta anyị. Na mgbakwunye, ịmụ asụsụ, ọbụlagodi mgbe ị kara nká, ga-eme ka isi awọ pụta. Ya mere, oge erughi ịmalite ịmụ asụsụ na Babbel!
- morebụrụ na-arụ ọrụ nke ọma
A na-akọwakarị ịsụ asụsụ abụọ dị ka asụsụ asụsụ abụọ mgbe niile. Mgbe ị hụrụ ụgbọ ala, asụsụ Franco-Spanish na-asụ asụsụ abụọ ga-eche ma ụgbọ ala ma okwu carro. Ọ bụrụ na ya na French ọzọ, ọ ga-ekwu maka ụgbọ ala, na-egbochi okwu carro, nke na-agbanyeghị ebe dị omimi n'isi ya.
Nnyocha Ellen Bialystok egosila na "elekere abụọ a", site na nke a na-akpọ, na-ewusi sistemụ "njikwa njikwa" ike, dị ka a ga - asị na asụsụ abụọ "akwara" akụkụ a nke akụkụ ahụ anyị.
N'otu ụzọ ahụ onye na-eme egwuregwu na-azụ ga-enwe ihe ịga nke ọma ibuli ibu dị arọ karịa onye nkịtị, ya mere, a ka zụrụ ndị na-asụ asụsụ abụọ ọzụzụ nke ọma ịrụ ụfọdụ ọrụ nghọta: ịme ọtụtụ ihe n'otu oge ahụ, idozi esemokwu, ịgbaga ngwa ngwa. Site n'otu iwu rue ọzọ, igbochi ihe.
- Ikwu asusu abuo na - amaliteputa ihe okike
Ọtụtụ nnyocha na-ekwukwa na ụbụrụ nke ndị na-asụ asụsụ abụọ na-emepụta ihe karịa nke ndị na-asụ asụsụ abụọ. Emere ihe ọmụmụ nke mbụ banyere okwu a na Quebec na 1962, ma kwubie na ịsụ asụsụ abụọ ga-enye ezigbo uru na ọkwa ọgụgụ isi, ọkachasị n'uche imeghe, imepụta ihe, na mgbanwe. Uzo eji eme ihe n’oge omumu a ka a na-agbagha mgbe nile: itule nke pere mpe, nlezianya nke ndi ozo, ebe ndi mmadu nwere ikike, wdg.
N'ikpeazụ, enwere nsonaazụ na-adịghị mma ma ọ bụ na-adịghị mma, mana na-anọpụ iche: ndị na-asụ asụsụ abụọ ga-ewe ogologo oge ịhọrọ okwu ha, ha ga-enwekwa obere okwu. Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na a gwa onye na-asụ asụsụ abụọ ka ọ kpọọ ọtụtụ mkpụrụ osisi dị ka o kwere mee, ọ ga-ewe oge karị iru mkpụrụ osisi nke onye na-asụ asụsụ abụọ kwuru.
Slowdị nwayọọ a adịghị n'onwe ya adịghị mma. Enwere ike ịghọta ya dị ka otu ụdị amamihe, nke mmụta asụsụ agaghị abụ onye ọbịa!
site Tranquillus | Feb 3, 2021 | Na weebụ |
N'inwe ihe karịrị nde 860 ndị na -ekwu okwu n'ụwa, ị na -agwa onwe gị: gịnị kpatara na ọ bụghị ọzọ? Ị chọrọ ịmalite ịmụ asụsụ Chinese? Anyị na -enye gị ebe a ihe kpatara ị ga -eji mụta asụsụ Mandarin Chinese, yana ezigbo ndụmọdụ anyị niile ka ịmalite ịmalite mmụta ogologo a mara mma. Kedu ihe kpatara, otu, na ogologo oge, anyị na -akọwara gị ihe niile.
Olee ihe ị ga-ahụ n’isiokwu a?
Gịnị mere ị ga -eji mụta asụsụ Chinese taa?
Ya mere, n'ezie, asụsụ Mandarin Chinese abụghị asụsụ a nabatara dị mfe mmụta. Ọbụna ọ na-anọchite anya hel nke ihe ịma aka nye ndị ọdịda anyanwụ chọrọ ịmalite. Ala mmụọ nke ihe ịma aka nke ka na-enye ọtụtụ ọdịmma ... Maka ndị hụrụ nsogbu n'anya, ọ bụrịrị ezigbo ihe kpatara iji mụta ya, maka ndị ọzọ ebe a bụ ezi ihe ndị ọzọ mere ha ga-eji mụọ asụsụ Mandarin taa.
Ọ bụ asụsụ mbụ a na -asụ n'ụwa ^
Ihe karịrị nde mmadụ 860 na -asụ Mandarin Chinese n'ụwa. Ọ bụ asụsụ a kacha asụ ma na -asụ n'ụwa niile. Ihe m ga -agwa gị na ọ bụlarịrị ezigbo ihe mere ị ga -eji mụta ya: nde mmadụ 860 ndị ha na ha ga -ekwurita okwu. N'ezie enwere olumba 24 na China, gbasaa na mpaghara niile. Agbanyeghị, ọtụtụ ndị bi na -aghọta Mandarin Chinese. A họrọkwara ya ka ọ bụrụ asụsụ izizi mbụ na ndị mmadụ Republic of China. Na ịka nke ọma, anyị na -ekwu maka Mandarin Chinese ebe a, mana anyị nwekwara ike ikwu maka Mandarin ma ọ bụ “Standard Chinese” (ọ bụ otu asụsụ!).
Ọ bara uru na mba ofesi (yana iji bulie CV gị) ^
China bụ nnukwu ihe na akụnụba ụwa. N'agbata oke ya n'ahịa mba ụwa na ọnụ ọgụgụ ndị na -ekwu okwu gburugburu ụwa, ọ na -aghọwanye ihe na -atọ ụtọ. Ịmụta (ma ọ bụ ihe ọmụma ọnụ na / ma ọ bụ ederede) bụ n'ezie nnukwu akụ na CV, ọkachasị na azụmaahịa mba ofesi, njem, azụmahịa ... Enwekwara ule nke ọkwa, ule HSK. site na ndị ọkachamara. Ọ nwere ike bụrụ ebumnuche gị mbụ ịnwale ule a, wee nweta ọrụ.
Kpachara anya, ịmụ asụsụ Chinese, naanị ịgbakwunye ahịrị "Chinese: ezigbo ọkwa" na CV gị agaghị enye gị mkpali na ịdọ aka ná ntị ịchọrọ ịmụ ya. Ị ga -enwerịrị ezigbo ihe kpatara ya, nke ga -enyere gị aka ijigide mkpali gị n'ọkwa dị elu n'oge mmụta gị niile. Na -arụ ọrụ na China, na -eme azụmahịa na ndị Asia, na -ebi n'akụkụ ụwa a, na -arụ ọrụ na njem nlegharị anya na France nwere ihe ọmụma pụrụ iche nke ahịa a… bụ ezigbo ihe kpatara ya! Ịmụ asụsụ Chinese itinye akara na CV gị abụghị ezigbo ihe kpatara ya.
Mụta ya site na mmasị dị ọcha n'asụsụ na omenala ^
Asụsụ Chinese bara ụba na ọtụtụ ihe na -adọrọ mmasị. Asụsụ abụọ na ọdịbendị nwere ike bụrụ ezigbo agụụ. Ịmụ asụsụ ahụ nwere ike inyere gị aka ịghọta ọdịbendị a nke ọma, nweta fim na akwụkwọ n'asụsụ Mandarin Chinese, mana chọpụtakwa nke ọma yana n'ụzọ emikpu: nri ya, ọgwụ ọdịnala ya, nkà ihe ọmụma ya, ụkpụrụ ọrụ ya, okpukperechi ma ọ bụ nka ọgụ ... Ọ bụrụ na ị bụ nwee mmasị, mgbe ahụ, a ga -akpali gị ịmụta ihe. Ọzọkwa, nke a bụ ezigbo ihe kpatara ya na ihe kpatara ga -eme ka ị nweta mmụta nke ukwuu.
Ọzọkwa, ị kwesịrị ịmara na dị ka ọtụtụ asụsụ ndị ọzọ, enwere ọtụtụ okwu na okwu na -egosipụta ọdịbendị China. Ọ dịkwa mma ịbịaru akụkụ ndị a nke ọdịbendị China site na ide ya.
Otu esi amụ asụsụ Chinese taa? ^
Mụta asụsụ Chinese n'onwe gị, na nke gị yana n'ịntanetị ^
Ọtụtụ ngwa na -enye gị ohere ịmụ asụsụ n'onwe gị. Ịmụta asụsụ Mandarin Chinese kwa. Enwere ike iji ụzọ anyị na -akwado site na saịtị anyị, yana n'ozuzu ya na asụsụ niile, iji mụta asụsụ Confucius.
Ngwa maka ịmụ asụsụ^
Ngwa a na -enye ọtụtụ uru n'ịmụ asụsụ. Enwere ike iji ha na ekwentị mkpanaaka wee soro gị ebe niile (n'ụgbọ njem, mgbe ị na -eme egwuregwu gị, n'ahịrị nke nnukwu ụlọ ahịa…). Ha na -ezipu ozi mgbe ị “chọrọ” ka ịmụta nke na -aga n'ihu n'ịmụ ihe. N'ikpeazụ, emebere ha ka ọ dị mfe iji, dị irè ma rụọ ọrụ nke ọma.
Ngwa maka ịmụ asụsụ Mandarin sitere na MosaLingua na -enye gị ohere ịmụta okwu na nkebi ahịrịokwu, site na ọkwa A1 - onye mbido - ruo ọkwa C1 - dị elu. O nwere ihe karịrị kaadị okwu 2000, yana okwu na ngosipụta a na -ejikarị. Uru nke ngwa anyị, ewezuga arụmọrụ nke usoro a, bụ na ọ na -enye gị ohere ịmụta okwu na mkpọpụta ya… nke na -enye gị ohere ikwurịta okwu “ngwa ngwa”.
Ngwa Pleco a na-ehotakarị bụ ngwa dị mma. Ọ bụ n'ụzọ nke akwụkwọ ọkọwa okwu ọtụtụ. Ị nwere ike chọọ agwa ma ọ bụ okwu na Pinyin (ntụgharị ụda olu), ngwa ahụ na -enye gị agwa, ihe ọ pụtara, mkpọpụta ya, ahịrị ...
N'ezie, ọ dị mkpa ịhọrọ ngwa nke masịrị gị. Ngwa na -enye gị ohere inwe ọganihu, ma buru n'uche ebumnuche gị (ma nke ahụ bụ ikwurita okwu, ide, njem, chọta ọrụ na China). Akwụsịla ịtụnyere ngwa, ụzọ mmụta na ọdịnaya ha. Maka nke a, ị ga -ahụ ụdị n'efu nke ngwa MosaLingua anyị na -akwado gị ka ịmalite.
YouTube na vidiyo enyemaka mmụta ^
Ọtụtụ ndị nkuzi ma ọ bụ ndị na-amụ ihe onwe ha dị mfe ekepụtala ọwa YouTube iji nyere aka kpaliri ịmụta ihe site na vidiyo. Uru vidiyo dị ọtụtụ (ọnụọgụ buru ibu, n'efu, ịhazi onwe gị), mana uru mbụ bụ na ha na -enye gị ohere ịmụ asụsụ / ọdịyo / asụsụ Chinese! Mandarin Chinese nke ị nwere ike iji ozugbo soro ndị na -asụ asụsụ kwurịta okwu. Ma ọ bụrụ na nkwukọrịta bụ ebumnuche gị, nke ahụ dị mma.
Ewezuga ịkpọpụta okwu na “ikwu okwu”, ụfọdụ vidiyo ma ọ bụ ọwa nwere ike kpalite isiokwu na -atọ ụtọ maka mmụta gị: okwu, njikọta, wdg. Dịka ọmụmaatụ, anyị na -akwado ọwa:
Egbula oge ịchọ ọwa kacha atọ ụtọ ma dabara adaba maka ebumnuche gị n'onwe gị, site na ịpị naanị na nchọta nchọta YouTube “mụta asụsụ China”.
Ebe nrụọrụ weebụ n'ịntanetị
Iji gaa n'ihu na paragraf gara aga, mara na gafere ọwa YouTube, enwere nyiwe vidiyo anyị na -akwado maka otu ihe ahụ. Karịsịa, ị nwere ike ịga na saịtị Youku na Tudou nke ga -enye gị ohere ịnweta ọtụtụ ihe onyonyo.
Enwekwara ọtụtụ webụsaịtị ebe ị nwere ike ịmụ asụsụ ahụ, ma ọ bụ opekata mpe were ihe ndị bara uru maka mmụta gị. Ederede, ụtọ asụsụ, njikọta, sistemụ ide, ụda, nkuzi ndị ọzọ… ị ga -ahụ ihe niile ịchọrọ na saịtị ịntanetị. Nsogbu a bụ, ị gaghị amụta otu ụzọ, a na -achọkwa ọzụzụ mgbe ụfọdụ n'asụsụ ama ama na ọ siri ike. N'ikwu nke ahụ, ego a dịnụ bụ n'ezie nnukwu ngwa iji gaa n'ihu.
Anyị na-atụ aro, dịka ọmụmaatụ, Chinese maka ndị Europe (nke e kere na mbido European Union), China Culture ma ọ bụ ọbụna Chine nke na-achịkọta ọtụtụ nkuzi.
Mụta soro ndị nkuzi soro ^
Dị ka anyị hụworo, Ịntanetị ugbu a na -eme ka ọ dị mfe ịmụta asụsụ n'onwe gị. Agbanyeghị, maka ndị ọ dị mkpa ka a na -elekọta ha, ka a na -eduzi ha n'ịmụ ihe, mara na gị na onye nkuzi nwekwara ike ịmụ asụsụ Mandarin Chinese. Ndị a nwere ike ịbụ n'ịntanetị ma ọ bụ nkuzi ihu na ihu Chinese, na otu ma ọ bụ n'otu n'otu. Nke a bụ usoro kachasị mma ma ọ bụrụ na ọ dị gị ka ịchọrọ ọzụzụ maka inwe ọganihu. Saịtị dị ka Preply ma ọ bụ Verbling na -enye gị ohere isoro ndị nkuzi n'ịntanetị na -enwe nkuzi nkeonwe (maka ego). Ị na -enwe ọganihu n'ike nke aka gị, ị na -eritekwa uru site na ezigbo ndụmọdụ nke ndị nkuzi pụrụ iche. Nke a bụ ụzọ dị irè, mana lee, ọ na -akwụ ụgwọ.
Ka ịhọrọ usoro na azịza dabara gị, ọ dabere na ebumnuche gị m ga -ekwu. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmụta okwu n'asụsụ nke gị ka ịhazi njem n'ime otu afọ, ị nwere ike bido n'onwe gị site na iji ngwa na akụrụngwa dị n'ịntanetị. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka ị mụta ihe ngwa ngwa iji zute ọrụ, okwu ndị akọwapụtara nke ọma, na okwu dị mma, mgbe ahụ nkuzi nkeonwe bụ ezigbo itinye ego. N'ọnọdụ ọ bụla, ịmụ asụsụ Mandarin Chinese yana ịmụ ọtụtụ asụsụ, ịmụba nkwado na ụzọ nwere ike inyere gị aka. Ị ga -esi otu a rite uru site na nke kacha mma na nke ọ bụla, ị ga -agbasakwa akụrụngwa iji nwee ọhụhụ zuru oke gbasara asụsụ na omenala Chinese.
Ogologo oge ole ka ịmụ asụsụ Chinese? ^
Ajụjụ onye ọ bụla na -ajụ. Ịmụta asụsụ Mandarin Chinese na mkpịsị aka gị, ụda niile, mkpọpụta okwu ziri ezi, oke okwu nwere ike… na -ewe oge. Na ụzọ dị n'ihu abụghị nke kacha dịrị anyị Francophones. Ụzọ ịmụta asụsụ Spanish nwere ike iyi ka ọ dị mfe n'akụkụ!
Agbanyeghị, ịmara otu esi ekwurịta okwu na ọkwa ma ọ bụ n'etiti na Mandarin Chinese abụghị ihe mgbagwoju anya, ọ dịkwa onye ọ bụla aka. N'ime ndị niile nwere mkpali, mkpebi siri ike, na ụzọ na ngwaọrụ dị mma. Ịmụ asụsụ Chinese, dị ka ịmụ asụsụ ọ bụla ọzọ, na -adabere ma na mkpebi nke onye na -amụ ihe, ngwaọrụ na akụrụngwa ejiri, na ịdị n'otu. Tinye ihe atọ ahụ ọnụ, ị ga -ahụ na mmụta gị ga -aga nke ọma. Mgbe ahụ, ruo ole mgbe ka ọ ga -adị? Ọ dabere na ebumnuche gị, oge ejiri mụta ya, yana mkpebi gị.
Asụsụ Chinese ^
Kedu ihe kpatara ịmụ asụsụ Chinese? Iji na -ekwurịta okwu, nri? N'echiche a, mgbe ị na -amụ asụsụ Chinese (dị ka asụsụ ọ bụla ọzọ, m na -ekwu) ọ dịkwa mkpa ilekwasị anya na nkà ikwu okwu ya. Kpachara anya, Mandarin Chinese abụghị asụsụ a maara na ọ dị mfe mmụta, ọkachasị maka mkpọpụta ụda olu ya 4. Mana, dị ka anyị kwuru n'elu, site na usoro ziri ezi, ezigbo ngwaọrụ iji kwado mmụta na mkpali gị, enweghị ihe kpatara na ị nweghị ike.
Ụda ụda ^
Kedu ihe a na -akpọ "ụda" ndị a? Ọ dị mma, otu okwu n'asụsụ Chinese nwere ike ịpụta 4 ma ọ bụrụ na akpọrọ ya n'ụzọ dị iche. Ihe atụ kacha mma bụ: mā (= mama), má (= hemp), mǎ (= ịnyịnya) na mà (= mkparị). Akwụkwọ ozi abụọ, okwu anọ dị iche iche, ụda anọ dị iche iche. Na mberede, 4. ọ bụ eziokwu na ịmụ asụsụ Chinese na -atụ egwu, mana 4. anyị na -aghọtakwa mkpa ịkpọpụta okwu dị mma ma ọ bụ ebe a, ụda ziri ezi. Ọ dị mkpa maka nkwukọrịta n'asụsụ Chinese.
Na okirikiri ^
N'ezie ụda dị mkpa, mana ọ bụghị naanị ya na -ezi ozi. Ihe gbara ya gburugburu dịkwa oke mkpa. Ekwuru m okwu Spanish n'elu, mana n'echiche a Spanish na Mandarin Chinese bụ (dịtụ) yiri. N'ezie, n'asụsụ Spanish, a naghị eji nnọchiaha nkeonwe: anyị agaghị asị m rie, rie, ọ rie ... Anyị ga -asị "rie, rie, rie". Ọ bụ okirikiri nke ga -enyere anyị aka ịghọta onye anyị na -ekwu maka ya (yana ngwụsị ngwaa). Maka ndị China ebe a, ọ bụ otu ihe: ọ bụ okirikiri na -enyere anyị aka ịghọta ọtụtụ ihe na ahịrịokwu ahụ. Ị maghị ma “ma” ị na -anụ na -ezo aka n'ịnyịnya ma ọ bụ nne? Ọfọn, nyere onwe gị aka na onodu. N'otu aka ahụ, ị ​​maghị ka esi eji ụda na Mandarin Chinese eme ihe? Echegbula, ihe ịrụ ụka adịghị ya na okirikiri a ga -eme ka onye na -akparịta ụka gị mata ihe ọ bụ.
Ngwaọrụ iji nyere gị aka ịsụ Chinese ^
Iji rụọ ọrụ na ịkpọpụta okwu gị, ụda na nkwukọrịta gị, ịnwere ike iji ngwaọrụ dị iche iche. Ọbụlagodi na ị bido mmụta a n'onwe gị.
Enwere saịtị na -achịkọta ma na -etinye uche na ndekọ ọdịyo na -enye gị ohere ige mkpọpụta na ụda ziri ezi. Ana m ekwu maka ya nke ọma maka forvo. Naanị ị ga -etinyerịrị okwu na pinyin (ntụgharị ụda olu, na mkpụrụedemede Latin) ma ọ bụ n'asụsụ Chinese iji gee ntị nke ụmụ amaala dere na saịtị ahụ.
Ngwa anyị maka ịmụ asụsụ Chinese na -enye gị okwu okwu na mkpọpụta okwu nke onye na -asụ asụsụ ala dekọrọ. Ị na -ege okwu nwere ụda kwesịrị ekwesị na ịkpọpụta okwu.
Na mgbakwunye na onye nkuzi nkeonwe, mara na ị nwere ike izute ndị mmekọ ịntanetị nke gị na ha ga -akparịta ụka. Ndị obodo nke chọrọ ịmụ asụsụ French dịka ọmụmaatụ na ndị gị na ha ga -akparịta ụka ntakịrị na Mandarin Chinese na ntakịrị na French. Anyị na -ekwu maka mgbanwe asụsụ, ọ na -atọkwa ụtọ ịrụ ọrụ n'okwu ọnụ gị n'asụsụ. Agbagharala akụkọ anyị ka ịchọta onye nta akụkọ China.
Ihe odide Chinese
Anyị na -anụkarị na, dị mfe, Mandarin Chinese anaghị etinye ọnụ, mgbada ma ọ bụ ihe isi ike ndị ọzọ n'ụdị a. Nke a bụ eziokwu, mana kpachara anya: asụsụ ka nwere ụfọdụ nsogbu. Usoro ide ihe bụ otu n'ime ha, ọ na -anọchi anya hel nke ihe ịma aka maka ndị na -asụ asụsụ French. Nke mbu ị kwesịrị ịma na Mandarin Chinese enweghị mkpụrụedemede n'ezie. Okwu ọ bụla sitere na otu mkpụrụedemede ma ọ bụ karịa nke anyị na -akpọ sinogram (yana anyị nwere ike ịtụle na ọdịbendị anyị dị ka eserese). Yabụ na anyị ekwesịghị ịmụ mkpụrụedemede, kama ka mụta mkpụrụedemede ndị a. Ọ dabara nke ọma, enwerekwa ọtụtụ ngwaọrụ ọzọ ga -enyere gị aka ịme akụkụ a nke asụsụ, ma ị na -amụ ya n'onwe gị ma ọ bụ na ị naghị amụ ya.
Ngwaọrụ ga -enyere gị aka ịmụta ide Chinese ^
Banyere ịmụ okwu, enwere ngwa ị ga -eji mụta mkpụrụedemede. Ma ọ bụ ugbua, ka ị mara onwe gị na usoro ide ihe ọhụrụ a ... N'ileghachi anya mbụ, mkpụrụedemede ndị a nwere ike iyi ihe siri ike. Na mgbakwunye, ị ga -amụta ihe ọ pụtara kamakwa ịkpọpụta okwu, wee mata ma dee ha. Ọ dịghị mfe.
Agbanyeghị, ọtụtụ ngwaọrụ na-enye gị ohere ịnagide nsogbu a.
A na -atụ aro ngwa Skritter (n'asụsụ Bekee) n'ọtụtụ oge. Ọ bụ ngwa na -eji, dị ka MosaLingua, usoro mmegharị anya sara mbara iji nyere gị aka ịmụta mkpụrụedemede, mata ha, kpọpụta ha ma dee ha.
Chineasy bụ ngwa ọzọ nke na - ejikọ eserese na sinogram iji rụọ ebe nchekwa gị na - ahụta ihe na - enyere gị aka ịmụ mkpụrụ edemede.
Younwekwara ike ịchọta ngwa ndị ọzọ site na ịpị "edemede Chinese" ma ọ bụ "odide Chinese" na iTunes ma ọ bụ Google Play.
Ọzọkwa, saịtị ọdịbendị Chine bara ụba na akụrụngwa, akụrụngwa na mmemme iji nyere gị aka ịmụ asụsụ ahụ. Yabụ, ị ga -ahụ ọtụtụ nkuzi hiwere isi n'ihe odide China. Dị ka nke a, enwere ọtụtụ webụsaịtị na -enyere gị aka ịghọta nke ọma wee na -eme ihe odide Chinese.
Dịka ọmụmaatụ, saịtị Chine Nouvelle na-enye gị faịlụ (n'efu) yana nkọwa nke mkpụrụedemede ahụ, nke gosipụtara gị otu esi eji ha nke ọma.
Kpachara anya, n'agbanyeghị na ịmụ asụsụ Chinese dị mkpa ma na -atọkwa ụtọ, mmụta gị ekwesịghị ịbụ naanị nke ahụ. Anyị na -ekwughachi: nkwurịta okwu ọnụ dị ezigbo mkpa iji nwee ike ikwurịta okwu. Etinyekwala uche n'ihe edere ede, mana chọta oke ziri ezi n'etiti edere ede na ọnụ.
Nke ahụ bụ maka ịmụ asụsụ Mandarin Chinese. N'ezie, ị ga -ahụ isiokwu gbasara ịmụ asụsụ Chinese nke nwere ike ịmasị gị na saịtị anyị. Anyị na -akpọ gị òkù ka ị gaa na ngalaba China nke saịtị anyị. N'ikpeazụ, anyị na -akpọ gị òkù ka ị lelee ibe akụrụngwa mmụta mmụta China anyị. Ma egbula oge ịjụ anyị ajụjụ gị niile ebe a! Ị mere nke ọma n'ịgụ akụkọ a ruo na njedebe. Kedu ihe ị chere maka ya? Biko hapụ anyị ihe edeturu, ọ ga -akpali anyị ide ọtụtụ akụkọ
5/5 (1 votu)
Ndi ibuotikọ emi ama enem fi? Soro ọgbakọ MosaLingua n'efu
Ihe karịrị nde mmadụ 3 na-erite uru na ya, gịnị kpatara na ị naghị erite uru na ya. Ọ bụ 100% n'efu:
Bido ịmụ asụsụ Mandarin Chinese
Chọrọ ịmụ asụsụ Mandarin Chinese?
Ozi Ọma Nke mbu: Anyị nwere ike inyere gị aka ozi ọma nke abụọ: You nwere ike ibido ugbu a n'efu! Mee ka ikpe n'efu gị rụọ ọrụ, ma nwee ọ methodụ n'ụzọ dị irè maka ịmụ asụsụ Mandarin Chinese ụbọchị 15.
Flashcards iji mụta okwu, vidiyo na ụdị nke mbụ na ndepụta okwu, akwụkwọ ọdịyo, ederede ederede dabara na ọkwa gị: MosaLingua Web na-enye gị ohere ịnweta ihe a niile, na ọtụtụ ndị ọzọ! Bido ozugbo (ọ bụ n'efu na ọghọm)
Isiokwu ndị nwere ike ịmasị gị: